Ukulinganisa ushukela wegazi nge-glucometer > Ukuhlaziya
Ukusuka kumuphi umunwe ukuthatha igazi likashukela nge-glucometer?
Amamitha kashukela egazi ngalinye avele athengiswa futhi atholakala ezigulini eziningi muva nje: ezweni lethu ekuqaleni kweminyaka yama-90s edlule, umuntu onesifo sikashukela wayenethuba lokuhlola ushukela wakhe izikhathi ezi-1-2 kuphela ngenyanga, bese kuthi kuphela esiswini esingenalutho. Cishe noma yiziphi izilinganiso eziphindaphindwe phakathi nosuku, futhi ngisho nangaphezulu ebusuku akubanga nambuzo. Ukuphela kwento ebekade kuyiziguli ezigula kakhulu ezazisezikhungweni ezinakekela abaguli ezibhedlela. Manje konke akulungile - kunoma iyiphi ikhemisi lekhemisi kunezinketho eziningi zamadivayisi acwebile okuvumela ukuthi uhlole izinga le-glucose noma kuphi nanoma ngasiphi isikhathi sosuku. Ungayikhetha kanjani efaneleke kakhulu?
Noma iyiphi i-glucometer iqoqo lezakhi: “ipeni” liyi-perforator lapho kubhoboza khona isikhumba, imichilo yokuhlola inesiphetho esikhethekile esihilelekile ekuhlaziyeni, ekugcineni, i-glucometer uqobo, ethatha izilinganiso. Kwisibambiso “sesibambo”, izibambo ziyadingeka - imikhonto emincane esetshenziselwa ukubhula. Konke lokhu kugcwele ecaleni elincanyana elincane.
Ezinye iziguli zizama ukonga ama-lancets - uma idivaysi isetshenziswa kuphela ngumuntu oyedwa, yenza ama-puncture ama-2-3 noma ama-4 nge-lancet efanayo, ukuyiguqula kuphela lapho kuvela izinhlungu lapho kubhobozwa. Ngempela, insimbi okwenziwe kuyo i-lancet inempahla yokugcina inzalo isikhathi eside, futhi ingozi yokutheleleka ngenkathi isetshenziswa okuphindaphindayo incane, kodwa akufanelekile ukuyenza, ngoba inaliti ilahlekelwa ubukhali bayo cishe ngokushesha nje ngemuva kokubhoboza kanye nokusebenzisa okuphindaphindayo kuholela ekulimaleni okuningi esikhunjeni kunoku ekugwazeni kokuqala. Yini esingayisho ngeyesithathu neyesine! Kepha iminwe kufanele isisize kuze kube sekupheleni kwempilo, ngakho-ke kungcono ukuyigcina. Ngaphezu kwalokho, womabili imichilo yokuhlola kanye nama-lancets angasetshenziswa kuphela ukusebenza ngemodeli ethile yemitha
Amalambu nemichilo yokuhlola isetshenziswa kanye - ngesilinganiso esilandelayo kudingeka siguqulwe.
Uma ama-lancets engabizi kakhulu, khona-ke ukuthenga imichilo yokuhlola kungenzeka kungathinti isabelomali somndeni wakho ngendlela engcono kakhulu. Ngakho-ke, lapho uthenga i-glucometer, okokuqala, udinga ukubala isidingo semivimbo yokuhlolwa futhi uqonde ukuthi ungakwazi yini ukukhokhela izindleko ezinjalo.
Kufanele wazi ukuthi imitholampilo eminingi inikeza iziguli ezinesifo sikashukela inani elithile lemicu yokuhlola ngenyanga mahhala, kanye nemithi enciphisa ushukela. Cacisa ukuthi imaphi amadivaysi anemichilo yokuhlola emtholampilo wakho, khona-ke ngeke ube nephutha uma uthenga imodeli enjalo. Lesi kuzoba yisinqumo esifanele kunazo zonke, ikakhulukazi njengoba amamodeli akhishwe kuwo imichilo yamahhala asetshenziswe isikhathi eside futhi azibonakalisa kahle
Uma uthatha isinqumo sokuxhaswa okuzimele, lapho ukhetha ithuluzi kuyathandazwa nokuthi ubheke izindleko zemivimbo yokuvivinya. Imvamisa intengo yabo icishe ibe ngama-ruble ayi-1000. iphakethe ngalinye lezingcezu ezingama-50. Njengoba wonke ama-glucometer enembile futhi ethembekile ukusebenzisa, lapho ukhetha imodeli, izindleko eziphansi zemichilo yokuhlola zivame ukuba yisici esinqumayo.
Ngabe usafuna ukuba nedivayisi enemisebenzi ethile, ngaphandle kokubiza izindleko zokuyihlinzeka ngezinto ezifanele? Ngemuva kwalokho uzoba nentshisekelo futhi ube wusizo kulwazi olulandelayo.
Ama-Glucometer ayizinhlobo ezimbili - ama-photometric ne-electrochemical. Ukunemba kwabo kokulinganisa cishe kuyafana, azikho izinzuzo. Ngasikhathi sinye, amadivayisi we-photometric athambile ngokwengeziwe, uma ewa, angahluleka. Ama-glucometer we-Electrochemical anamandla - "ukulimala" akukuthinti ukusebenza kwawo.
Kubantu abanezinkinga zokubona, kuye kwenziwa imodeli “yokukhuluma”.Ngeke babike kuphela umphumela, kodwa futhi bazokutshela inqubo yokulinganisa. Lo msebenzi uphethwe yiClever Chek TD-4227A glucometer (Clover Check TD-4227A) neSenso Card Plus (Sensocard Plus).
Usayizi wokudonsa igazi
Amamodeli ahlukahlukene we-glucometer asetshenziselwa ukuhlaziya amaconsi egazi asayizi ahlukahlukene, kodwa eqinisweni wonke la maconsi mancane kakhulu ukuthi le ndawo akufanele ibe yinqumo lapho uthenga. Kanye nesikhathi sokulinganisa: imizuzwana emi-5 noma ama-30 - akunandaba.
Ukulinganiswa komphumela ngegazi le-capillary noma nge-plasma nakho akuwona umehluko obaluleke kangako. Into esemqoka ukuthi isiguli nodokotela bazi kahle ukuthi le divayisi ibalwa kanjani, futhi bayakubheka lokhu lapho behlaziya imiphumela.
Umthamo wememori ye-Glucometer
Cishe wonke ama-glucometer abamba ngekhanda inani elithile lezilinganiso, kepha ivolumu ye-palliative yehlukile kuwo wonke umuntu. I-Accu Chek Performa Nano (i-Accu Chek Performa Nano) ne-One Touch Ultra Easy (Van Touch Ultra Uzi) inenkumbulo enkulu kunazo zonke. Inani lememori libalulekile kulabo abasebenza ngeedayari kagesi nezinhlelo ezikhethekile zokuhlaziya. Kubasebenzisi abajwayelekile, lo msebenzi akuyona into ebaluleke kakhulu.
Ngokusekelwe kudatha egciniwe enanini elikhulu lezilinganiso, idivaysi ingakwazi ukubala inani eliphakeme le-glucose ngesikhathi esithile: izilinganiso ezengeziwe zisetshenzisiwe, inani eliseduze liseduze kakhulu ne-hemoglobin ye-glycated.
Amanye amamitha kashukela egazi angahlukanisa ngisho nazo zonke izilinganiso ngamaqembu amabili - ukuzila ukudla nangemva kokudla ukuhlolwa kwegazi. Ukubalwa okunjalo kuzokwenziwa yi-One Touch Select ne-Akku Chek Activ.
Imitha ye-Contour TS izokhodi ngokuzenzakalelayo imichilo yokuhlola. Kwamanye amamodeli, lokhu kuzodingeka kwenziwe ngesandla noma ngosizo lwama-chip akhethekile, noma empeleni kungekho nzima ukufaka i-chip emgodini okuhloswe ngawo.
Imiyalo efakwe kudivayisi ngayinye ichaza ngokuningiliziwe ukuthi ungakwenza kanjani lokhu. Futhi bazi - inketho enjalo iyatholakala. Kuyisono ukungasebenzisi inzuzo.
Okuwusizo ngempela kulabo abangalinganisi ushukela nsuku zonke futhi, ngenxa yalokho, abadla imichilo yokuhlola embalwa, ukupakisha ngakunye kubo. Uma imichilo iku-tube evamile, ingasetshenziswa kuphela izinyanga ezi-3 ngemuva kokuba ivuliwe, bese belahlekelwa ukunemba kwesilinganiso.
Ngendlela, ukuze lokhu kungenzeki ngaphambili, ungagcini uvule ishubhu. Bakhipha umucu wokuvivinya - base bewuvala: emoyeni, i-reagent esetshenziselwa strip ishintsha izakhiwo zayo. Imichilo evalelwe egobolondweni elihlukile ingasetshenziswa kulo lonke usuku lokuphela oluboniswe kwiphakheji.
Hhayi kuphela i-glucose engalinganiswa
Enye impahla ebalulekile yama-glucometer ngamapharamitha angalinganiswa kusetshenziswa imodeli eyodwa noma enye. Iningi lazo linquma kuphela ushukela wegazi, kepha kukhona “nama-generalists” akala ngaleli cholesterol, triglycerides, imizimba ye-ketone ne-lactate.
Imitha ye-glucose i-Optium X Contin (Optium Exid) kuphela enganquma ushukela nama-ketones. Inzuzo yayo futhi ukufakwa komuntu ngamunye kwemichilo yokuhlola, ekuvumela ukuthi uyisebenzise isikhathi eside kunokuthi ngabe iku-tube ejwayelekile. Futhi konke lokhu ngentengo ebiza kakhulu, okungenakushiwo nge-Accu-Trend Plus (Accu-Trend Plus). Yebo, le glucometer izokhombisa ushukela wegazi, i-cholesterol, ama-triglycerides namazinga e-lactate (ayikwazi ukubekezelela imizimba ye-ketone), kodwa intengo yayo iphindwe izikhathi eziphindwe kayi-4 kunamanye amadivaysi alesi sigaba.
Yebo, futhi imichilo yokuhlola iphula amarekhodi ngentengo, kepha inkomba ngayinye idinga umucu wayo
Ungayihlola kanjani ushukela wegazi
Ngakho-ke, kukhethwa indawo yokubhoboza - ngokwesibonelo, umunwe wokukhala wesandla sobunxele. Kuyadingeka ukugxila emaphethelweni wethango lomunwe, ngoba kulapha ukuthi kukhona ama-capillaries amaningi futhi kulula ukuthola inani legazi elifanele. Ukujula kokubhoboza kukhethiwe ngakunye - kuya ngobukhulu besikhumba. Ukuze wenze lokhu, kunesilawuli sokujula ku "isibambo" -sokuqinisa, ngokuguqula lapho ungakhetha inketho ezifanele kuleli cala elithile. Ezinganeni ezincane, ungabeka inombolo engu- "1", intsha - "2", amadoda amadala anesikhumba esinyene nesomile azodinga okungenani u- "4".
Izindawo lapho ungathatha khona igazi nge-glucometer
Ngaphambi kokubhoboza, izandla kufanele zigezwe kahle ngensipho, mhlawumbe amanzi afudumele: azofudumala, ukuphuma kwegazi emunweni kuzonyuka.
Bese usula izandla zakho ngethawula elihlanzekile. Asikho isidingo sokwelapha isikhumba ngotshwala - insimbi eyenziwe ngalo i-lancet inezindawo zokukhipha izidakamizwa, futhi ukuphonsa utshwala egazini kungahlanekezela umphumela. Utshwala busetshenziswa kuphela uma kungekho ndlela yokugeza izandla. Kuyelulekwa ukwenza lokhu akuvamile ngangokunokwenzeka, ngoba ngaphansi kokuthonywa utshwala isikhumba siba kancane kancane futhi siqubuke, futhi ukubhoboza izinhlungu ngasikhathi sinye kube buhlungu kakhulu. Ukusula izandla zakho ngethawula, kufanele kube khona ukuthambisa kancane, kwehlise ibhulashi phansi bese welula kancane umunwe, lapho uzothatha khona igazi.
Okulandelayo, udinga ukulandela imiyalo eza nemodeli ngayinye yemitha. Amanye amadivaysi avulwa ngokucindezela inkinobho ekhethekile, amanye azikhanyise masisha lapho nje umucu wokuhlola ufakwe emgodini okhethekile. Kwimizuzwana embalwa, idivaysi izolungela ukusebenza, bese izokhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi isebenze: ngokwesibonelo, kuzovela isithombe esibonisa ukushona kwegazi. Ngemuva kwalokho uzodinga ukubhoboza umunwe wakho: ulethe futhi uhlabe ngokuqinile endaweni ekhethiwe emunweni (ipunch okungaxhunyiwe kuyokhulisa ubuhlungu ngesikhathi sokuphathwa kwesikhumba), cindezela inkinobho ekhethekile (imvamisa iseceleni kwe-perforator), futhi umsebenzi ucishe wenziwe. Kusala kuphela ukucindezela umunwe eduze kwendawo yokubhoboza, ulinde ukuvela kwegazi, unamathisele umucu wokulinganisa kuyo bese ulindela isinali elisha elizokhanya kuqapha le-metre - lokhu kusho ukuthi inqubo yokuhlaziya isiqalile. Ngemuva kwemizuzwana embalwa, izinombolo zizovela endaweni efanayo - lokhu kuzoba izinga leshukela elibekiwe. "Ukukhuluma" ama-glucometer azobika umphumela emphakathini.
Umucu wokuhlola kufanele ulethwe ekujuleni kwegazi nge-engeli engaba ngu-90 ° ebusweni bomunwe, okungukuthi, ungafaki phezulu, kepha thinta umunwe - njalo endaweni yokwehla kwegazi. Ngemuva kwalokho umucu “uzowuthatha” njengoba kudingeka ekuhlaziyeni. Ngaphandle kwalokho, igazi eleqile lingavimba inqubo futhi umucu wokuhlola uzokonakala.
Isidingo sangaphambilini sokususa iconsi legazi lokuqala futhi uthathe ukuhlaziya okwesibili manje asisebenzi. Cishe wonke ama-glucometer asebenza ngethonthi lokuqala legazi.
Ngemuva kokuthola umphumela, idivaysi kumele ihlangane endaweni yayo yoqobo. Okokuqala, sula umunwe wakho - manje ukuthi i-napkin yotshwala, engangifuna ukuyisusa ngokuphelele ngaphambi kokubotshwa, ingangena kahle, yize kungenzeka ukwenziwa ngebhola elilula lekotini. Imvamisa, ukopha kuyema cishe khona manjalo, futhi akudingeki ubambe i-napkin noma i-tampon isikhathi eside. Susa umugqa wokuhlola osetshenzisiwe kusuka kumamitha kanye ne-lancet kusuka ekuqhubeni kwesando. Womabili angaphonswa emgqonyeni (ukumfaka kusengaphambili isixazululo segciwane, njengoba kwenziwa ezibhedlela, akudingeki). Isembozo sechubhu esinemichilo yokuhlola kufanele ngabe sivalwe isikhathi eside (ngiyanikhumbuza: imichilo ayithandi umoya!), Ukuze yonke imininingwane yedivayisi ingafakwa ecaleni elikhethekile. Inqubo isiqediwe kuze kufike isikhathi esilandelayo. Manje sidinga ukuhlola umphumela.
Ukuhunyushwa kwemiphumela yokuhlaziywa
Imitha ngayinye inokulungiswa kwayo, futhi, ngokuhambisana, amazinga angahluka. Lokhu ngokuqinisekile kuzoshiwo emiyalweni yensiza. Imvamisa, umkhawulo ophezulu ojwayelekile esiswini esingenalutho ngu-5.6 mmol / L, ngokushesha ngemuva kokudla - kungabi ngaphezu kwe-10 mmol / L, kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla - 7.8 mmol / L. Qhathanisa imiphumela nezindlela bese uzihlola.
Ukuhlaziya kahle izinkomba, kufanele zifakwe ephepheni noma ekhompyutheni - ngendlela othanda ngayo. Ukushiya kubo kuphela kumitha yemitha akulungile ngokuphelele, noma ngabe kunenkumbulo enkulu: akukho kucace. Kwidayari ejwayelekile, ungaqokomisa ikholomu "yamanothi" (akunakwenzeka ukwenza lokhu ngemitha, futhi idivaysi ingalimala ngenxa yokuwa noma enye "ingozi", futhi lonke ulwazi luzolahleka).Ngaphezu kwalokho, ugcwalisa idayari, ungahlaziyi uzoqala ukuhlaziya lokho okubhalile, futhi lokhu kuzoba ngesinye isizathu sokudonsela ukunakekela kwakho wena othandekayo, esivame ukusiveza.
Idayari yesifo sikashukela
Yini okufanele ibe idayari enjalo? Ezinye iziguli zikuthatha ngendlela uNkulunkulu ayekufaka ezinhliziyweni zazo: abakubonile kufanele, bakubhala phansi. Eqinisweni, lokhu kunembile - okokuqala, idayari kufanele ibe nemininingwane isiguli ayibona ibalulekile kuye. Kuyinto efiselekayo ukwengeza okulandelayo kuyo.
Impela, usuku lokulinganisa. Ngaphandle kwakhe? Ngaphandle kwalokho, ngemuva kwezinsuku ezintathu uqala ukudideka - bekungolwesithathu noma uLwesine?
Yimiphi imishanguzo oyithathe ngalolo suku futhi ngasiphi isikhathi, ikakhulukazi i-hypoglycemic.
Isikhathi sokulinganisa esingabonisi amahora kuphela kodwa nemizuzu. Imizuzwana ayibalulekile.
Umphumela wokulinganisa. Le yinto ebaluleke kakhulu, lapho konke, empeleni, kukhulelwa.
Kunokunye okukhona - ikholomu "amanothi".
Bhala phansi konke okungajwayelekile okwenzeka ngalolo suku: kwakukhona ukusebenza ngokomzimba kakhulu kunokuhlala njalo (“wenza kabusha” indlu, watshala amamitha skwele angamakhulu amathathu, wabamba iqhaza emiqhudelwaneni yokushibilika, njll.), Qaphela izingcindezi - hhayi ezincane zansuku zonke, kepha sina ("ibhalansi" yengcindezi, wonke umuntu uyazinqumela). Mhlawumbe, isimo sempilo siba sibi kakhulu ngenxa yenkinga yegazi noma ikhala eligobhozayo? Qaphela futhi lokhu kudayari. Futhi-ke, ungakhohlwa ukuhlanganyela emkhosini.
Yonke le micimbi kungenzeka ukuthi ingaqashelwa wumzimba, futhi lokhu kumele kuphawulwe. “Amanothi” uwukholamu obaluleke kakhulu; ngaphandle kwawo, kuzoba nzima ukuthi udokotela ahlole ukuthi kwenzekani nesiguli bese ethatha isinqumo sokuthi ngabe udinga ukukushintsha yini ukwelashwa noma cha.
Mayelana nokuhlolwa kwedatha
Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi izinkomba ze-glucometer ziyehluka kumphumela otholakala ngasikhathi sinye ngendlela ehlukile yocwaningo noma ngosizo lwenye i-glucometer. Kungani kunjalo
Ukuze uhlaziye imiphumela etholwe kusetshenziswa ama-glucometer amabili noma ngendlela yaselebhu, kudingeka uhlole ngokucophelela ukuthi izifundo zenziwa kahle kanjani.
Ukubalwa kweseli elibomvu
Ukusuka enxebeni elifanayo ku-phalanx yokugcina yomunwe wesine, ithonsi elilandelayo liqoqwa ku-epitrocyte mixer (melanger), okuyi-capette ye-capillary eneziqu ezinesandiso (i-reservoir) ngesimo se-bubble enefolishi elibomvu eliboshwe kulo. Igazi lisunwa lifane ngqo nophawu lwengu-0,5, futhi uma isiguli sinemizwa - emfuzwini ka-1. Ngemuva kwalokho, ngokucophelela ukuze singaphumi igazi, kuphakama isixazululo se-sodium chloride eyi-0.85-1% sodium chloride. 5 kanye noketshezi oluqeda igazi, ulethe umthamo kumaki 101, bese lelo damu lizoncanywa amahlandla angama-200, uma igazi lidonsele kumaki 1, khona-ke lizodonswa amahlandla ayikhulu. I-capillary iboshwe phakathi kweminwe emibili isendaweni evundlile futhi inyakaziswe ngo-2- Imizuzu emi-3, bese kuthi ukwehla kwegazi elihlanjululwe egumbini lokubala. Amaconsi okuqala u-2-3 awulungele ukubalwa, akhanywa.
Ukuze ulondoloze isimo esijwayelekile, abanesifo sikashukela badinga ukuthatha imitha kashukela egazini nsuku zonke. Ukuze inqubo ingenabuhlungu, kubalulekile ukwazi ukuthi imuphi umunwe okufanele uqunywe lapho isampula legazi lihlaziywa nokuthi yiziphi ezinye izindawo ezikhona zokulinganisa ushukela.
Imvamisa, igazi lokucwaninga lithathwa emunweni, ngoba kulula kakhulu ukufaka izinto eziphila emzimbeni womucu wokuhlola ovela kule ndawo. Ukhuphula ukuhamba kwegazi futhi uthole isilinganiso esifanele segazi ngaphandle kwezinkinga, vele ubambe izandla zakho ngaphansi kwamanzi afudumele bese uthambisa iminwe yakho kancane.
Amadivayisi we-lanceolate anamuhla akuvumela ukuthi ukhethe ileveli yokubopha, ngokuya ngobukhulu besikhumba. Ukujula futhi kuya ngokuthi isiguli sicindezela kangakanani ikhanda lepeni lokubhoboza.Lapho uhlola igazi ezinganeni, kuvame ukukhethwa indawo encane ukuze kungalethi usizi emntwaneni futhi ithole idatha ethembekile.
Ukuqoqwa kwegazi lokubala kwamaseli amhlophe egazi
Ithonsi legazi lidonswa ekubunjweni okufanayo kwesikhumba njengakwizifundo zangaphambilini, libe yi-melanger ehunyushwe ngokukhethekile kule nhloso, inebhola elimhlophe ku-ampoule nophawu futhi ngaphezulu kwe-ampoule. Ukuze kufakwe i-leukocytes, kutholakala isixazululo esingu-3% se-acetic acid, esihlakaza amaseli abomvu egazi. Ukuze ama-leukocytes abonakale kangcono, amaconsi ama-2-3 esisombululo esingu-1% samanzi we-gentian violet afakiwe ku-acetic acid, efaka i-nuclei ye-leukocytes. Igazi lidonswa e-melanger liye kumaki ka-0.5, bese kuthathwa isixazululo se-acetic acid emaka umaka-11, i.e. igazi lihlanjululwe amahlandla angama-20. Ngenani elikhudlwana leukocytes, igazi lidonswa engxenyeni ebomvu yegazi lisho uphawu lwe-0.5 (i-dilution izikhathi ezingama-200) futhi inyakaziswe ngendlela efanayo ne-melange cell ebomvu. Amaconsi okuqala ayi-2-3 awalungele ukubalwa, akhanywa. U-fig. 11. Umxubanisi wamaseli amhlophe egazi.
Ama-Smears alungiselelwe kuma-slides engilazi angenawo amafutha, okugcwele kuwo agcinwa kuflash ngotshwala. Sula ingilazi ngendwangu ehlanzekile ukuze yome, kepha ungathinti ubuso bayo ngeminwe yakho. Ukulandela izinyathelo ezifanayo zokuphepha, unqenqema lwengilazi lufakwa ekwehleni kwegazi emunweni, uqiniseke ukuthi ingaphezulu lengilazi alithinti isikhumba somunwe. Ngemuva kwalokho, ingilazi ithathwa ngesithupha kanye nesandulelo sesandla sobunxele ukuze ithonsi legazi lisondele emunweni wenkomba. Ngemuva kwalokho, isengezo sekhava yeglasi enesihlabathi esinqenqemeni esibekiwe sibekwa kwisilayidi sengilazi esiyi-45 ° ngakwesobunxele sokwehla bese usiletha ngokucophelela. Lapho ithonsi legazi lisakazeka eceleni komphetho wesembozo, liholwa ngokushesha nangendlela efanele libheke esifubeni. I-smear enhle kufanele ibe mncane, ngisho futhi ibe ne-velvety surface. Kunconywa ukwenza imivimbo emibili. I-smear eye yomile emoyeni icwiliswa kubhavu ngotshwala be-methyl okwemizuzu engu-3, ​​bese isuswa ngama-tweezers ngaphezulu komphetho ongalayishiwe bese ibekwa ngokuqondile ephepheni lokuhlunga. Ukulungiswa ku-methyl utshwala kungathathelwa indawo ngokulungiswa kwengxube yezingxenye ezilinganayo ze-methanol ne-ether (imizuzu engama-45-60). Uketshezi lokulungisa emgqonyeni lusebenza unaphakade.
Umnyango Wezempilo weSifunda Amur
I-State Autonomous Institution of the Amur Region, inhlangano yezemfundo efundisayo
I-Amur College of Medicine
ukuthuthukiswa kwesifundo esisebenzayo
MDK 02.01. Ithiyori nokuzilolonga kwezifundo ze-elematological ze-elebhu
isiqu Isazi Sezokwelapha
Isihloko: Ukuthatha igazi kusuka emunweni ukwenza ukuhlaziya ngokomtholampilo.
Ukuthuthukiswa kwendlela yesifundo esisebenzayo sabafundi kuthuthukiswa ngokuya ngohlelo lomsebenzi we mojuli efanelekile PM.02 Izifundo zeLebhu ze-hematological inkambo yezindlela ezahlukene MDK 02.01. Ithiyori nokuzilolonga kwezifundo ze-elematological ze-elebhu kanye nezidingo ze-GEF 02/31/03 Ukuxilongwa kweLabhoratri ngomsebenzi "Uchwepheshe Wezokwelapha. "
Umthuthukisi wenhlangano: GAU JSC VET Amur Medical College.
UStrinadko Tatyana Valerievna, oqokelwe izifundo zesayensi yemvelo, uthisha eSifundazweni Sombuso Sezemfundo seHulumeni i-State Autonomous Stock Company Amur Medical College, isigaba sokuthola iziqu.
Ukuthuthukiswa kwendlela yochungechunge lwezigaba ezisebenzayo zothisha kubhekwe emhlanganweni weKomidi Elikhulu Lama-Special Disciplines, futhi kwatuswa ukuthi kusetshenziswe abafundi basekolishi lezokwelapha.
Uhlu lwezincwadi ezisetshenzisiwe.
Itimu:Ukuqoqwa kwegazi leminwe kokuhlaziywa kwemitholampilo.
Injongo: Funda ukuthatha igazi emunweni.
Abafundi kufanele bazi:
Ungayilungisa kanjani ama-reagents ngokuthatha igazi kusuka emunweni.
Imithetho yokulungiselela isiguli ukuthatha igazi emunweni.
Inqubo yokuthatha igazi ukucwaninga.
Yimaphi amaphutha angenzeka lapho kuthathwa igazi ngomunwe.
Abafundi kufanele bakwazi:
Ukulungiselela imishini kanye nama-reagents wokuthatha igazi kusuka emunweni.
Lungiselela uchwepheshe welebhu.
Thatha igazi kusuka emunweni ukuhlolwa okuhlukahlukene.
izinzuzo zevolumu (ukuqoqwa kwemikhiqizo yegazi),
izinto eziphrintiwe (ukuthuthukiswa kwendlela yesifundo esisebenzayo sikathisha, ukuthuthukiswa okwenziwe kwesifundo esisebenzayo sabafundi),
izinto zokubamba (isethulo).
Amathuluzi wokuqeqesha ngobuchwepheshe:
3. Imishini ekhethekile:
I-hemoglobin reagent kit
Izindlela zokucwaninga kwelabhoratri yemitholampilo / ed. prof. I-V.S. Kamyshnikov. - I-4-ed. - M: MEDpress-yazisa, 2011 .-- 752 p .: Ill.
Izindlela zocwaningo lwelabhoratri lomtholampilo. Incwadi yezikhombo. Emavolini ama-3. Ed. V.V. Menshikov. - UM, Laborator. 2008 .-- 448 k.
G.E. I-Roytberg, A.V. I-Strutinsky Laborator kanye nokuxilongwa kwethambo kwezifo zezitho zangaphakathi. Incwadi eyinkomba yezokwelapha ese-lain.
Inombolo yomsebenzi 1. Funda nokubala:
Imithetho yokuthatha igazi.
Ucwaningo lunconywa ekuseni ngesisu esingenalutho noma ihora eli-1 ngemuva kwesidlo sasekuseni esilula. Igazi lokuhlaziywa okujwayelekile komtholampilo lithathwa esigulini imvamisa lisuka kumpulangwe womunwe wesine, i-vein noma i-earlobe, nasezintweni ezisanda kuzalwa esithendeni. Akunconyelwe ukuthatha igazi ngemuva kokuxineka ngokomzimba nangokwengqondo, ukusetshenziswa kwemithi, ikakhulukazi ngokuphathwa kwe-intravenous noma kwe-intramuscular, exposal kuma-x-rays nangemva kwezinqubo zomzimba. Ezimweni eziphuthumayo, le mithetho ayinakwa. Ukulandelanisa okulandelayo kwesampula yegazi ocwaningweni kulungile:
igazi lokunquma i-ESR,
igazi lokucacisa ukuqoqwa kwe-hemoglobin,
igazi ukubala inani eliphelele lama-leukocytes,
igazi lokulungiselela i-smear nokucwaninga kweseli elimhlophe legazi.
Umsebenzi wenombolo 2.Lungiselela ama-reagents adingekayo ukuthatha igazi emunweni wakho:
Isixazululo se-sodium chloride (ukulungele ukusebenzisa),
I-Acetic acid 3% (isisindo esingu-3 g. Ye-acetic acid, engeza amanzi ancitshisiwe ku-100 ml),
I-Sodium citrate 5% (yenza isampula engu-5 g. Ye-citric acid, engeza amanzi agcobhoziwe ku-100 ml),
Iqoqo lama-reagents wokunquma i-hemoglobin ngendlela ye-hemichromic (Hemoglobin - Novo, Vector Best). Kakhulu udlulise okuqukethwe kwekhambi le-reagent vial (ukugcwaliswa okungu-100 kwe-sodium dodecyl sulfate solution) ku-1000 ml volumetric flask, ulethe ivolumu yesisombululo kumaki namanzi, uxube, ugweme ukufaka amagwebu.
Umsebenzi wenombolo 3. Hlela indawo yokusebenza ukuthatha igazi emunweni:
Emsebenzini, lapho uthatha igazi, kunezindawo ezi-3:
Endaweni ehlanzekile kukhona:
Amathuluzi oyinyumba, uvolo okotini oyinyumba, ama-tweezers angenantambo
Ama-capillaries angcolile wePanchenkov
Isisombululo se-5 sodium citrate (i-citrate) engabanzi
Amgilavu ​​enjoloba enjoloba
Endaweni engcolile kukhona:
Ukuhlonza izixazululo zokwelashwa komhlaba (isi-6% isisombululo se-hydrogen peroxide, isixazululo se-0.6% se-calcium hypochloride, njll.)
Umthamo nge-cotton swabs yamagilavu
Amathangi okugcina - iziqukathi zemfucuza: uvolo osetshenziswa kukotini, izikhafu, ama-capillaries
I-Tripod enamashubhu wokuqoqa igazi we-ESR, amaseli abomvu egazi, i-hemoglobin, amaseli amhlophe egazi
Ipuleti lokuqoqwa kwegazi - Isitsha sikaPetri esinengilazi ebunjiwe yokwenza i-smear yegazi
Amandla we-smears wegazi aphekiwe.
Umsebenzi wenombolo 4. Lungiselela isitayela somsizi welebhu:
fig. 1. isitayela umsizi welebhu.
Imishini yaselebhu isetshenziselwa ukwenza lula amasampula egazi.
I-tripod epulasitiki yesisekelo esingu-40, 1 pc.
Amashubhu wokuhlola 14x120 mm, ama-10 ama-PC.
Ipensela yengilazi 1 pc.
I-Sali capillary 1 pc.
Umthamo wezinto zokungcola 2 ama-PC.
I-Scarifier 10 ama-PC.
Isilazi seglasi elinomgodi 1 pc.
Ingilazi yokwelula imivimbo 1 pc.
Isiladi se-10 ama-PC.
Isilinda - inombolo yemitha yokudonsa "0", 1 pc.
amabhola ukotini oyinyumba
amapayipi angcolile anamandla ka-0,02
Umsebenzi wenombolo 5. Thela ama-reagents kumashubhu:
Ukubala amaseli abomvu egazi, gcwalisa ishubhu ngo-4.0 ml wesisombululo se-isotonic sodium chloride.
Ukubala inani lama-leukocytes, gcwalisa ishubhu ngo-0,4 ml wesisombululo esingu-3-5% we-acetic acid,
Ukunquma inani le-hemoglobin, gcwalisa ishubhu nge-5.0 ml ye-reagent esebenza.
U-fig. 2. Isikimu sokuhlanjululwa kwegazi ekunqumeni i-hemoglobin (a), sibala inani lamaseli abomvu egazi (b) kanye nenani eliphelele lama-leukocytes (c)
Umsebenzi we-6. Phenya umunwe wakho bese udweba igazi:
Ungathathi igazi ezindaweni ezinamakhaza noma ezilimele. Uma isiza sokuqunjelwa okusolwa ukuthi sibanda noma senziwe nge-cyanotic, sishiswa kuqala ngokwenza izihlungo. Ngesikhathi sokudonsa igazi emunweni, isiguli kufanele sihlale noma silale phansi. Isikhumba se-pulp ye-nail phalanx yomunwe wesine wesandla sasobunxele sisulwa ngebhola likotini elinyaniswe notshwala futhi sihlatshwe ngomuntu ngamunye oncibilikayo ongatheni. Umjovo kufanele wenziwe ngokunyakaza okufishane uze ume, ngenkathi ulungisa ngeminwe yesandla sobunxele i-phalanx yokugcina yomunwe wesine wesiguli bese ucindezela isikhumba kancane. Iconsi legazi lokuqala lisulwa ngebhola likotini elomile. Ukusuka kumaconsi egazi alandelayo, ngokucindezela okumnene, inani elifunekayo legazi liqoqwa ngokushesha.
Thatha igazisokunqunywa kwe-ESR:
I-Panchenkov capillary, egcwaliswe ngaphambili ngesixazululo se-sodium citrate engu-5% kumaki "75", igezwa ngaleli reagent, ilishaye lize lize ngaphansi kwethambo le-Vidal. Ngemuva kwalokho, igazi ligxanywa kumaka "0" (100 mm) nge-capillary efanayo. I-capillary igcwele igazi kancane kancane, njengoba kuvela amaconsi amasha egazi endaweni yomjovo. Ngemuva kwalokhu, uginindela womunwe wesulwa ngebhola lekotini elomile, futhi igazi elivela ku-capillary lishaywa kwi-tube test nge-citrate futhi inyikinyeke kahle. Kufanele kukhunjulwe ukuthi isilinganiso se-sodium citrate negazi ku-tube yokuhlola kumele sibe yi-1: 4 impela. Ngemuva kwalokho ingxube ye-sodium citrate negazi iphinde ingene kwi-Panchenkov capillary iye kumaki "0" bese iyibeka ku-tripod ekhethekile, ephakathi kwamaphakethe enjoloba amabili.
U-fig. 4. ukufakwa kwama-capillaries kwizixhobo zePanchenkov.
Thatha igazi ukunquma okuqukethwe kwe-hemoglobin.
Thatha i-pipette eyomile oyinyumba enomthamo we-0,02 ml bese udonsa igazi kuyo kulolu phawu. Ngemuva kwalokho igazi lishayelwa ku-tube elinesixazululo esiguqulayo bese kuthi ipayipi lixoshwe kaninginingi ngaleli khambi. Isayithi lomjovo liphinda lisulwe ngotshani bekotini owomile.
Thatha igazi ukubala amaseli abomvu egazi.
Igazi lisuka emunweni lidonswa kwi-pipette liye kumaki we-0,02 ml bese lishaywa kwishubhu yokuhlola enesixazululo se-isotonic sodium chloride engu-4,5, ihlanza i-pipette kaningana nalesi sixazululo. Ngakho-ke, kutholakala i-dilution yegazi izikhathi ezingama-200.
Thatha igazi ukubalaisibalo esimhlophe segazi elimhlophe:
Futhi, igazi lidonswa kwi-pipette kumaki we-0,02 ml bese lishaywa ku-Vidal tube egcwele u-0,4 ml wesisombululo se-acetic acid hemolyzing amaseli egazi abomvu. Ngakho-ke, kutholakala i-dilution yegazi izikhathi ezingama-20.
Yenza ama-smears wegazi ukuze kuhlolwe amaseli amhlophe egazi:
Ithonsi legazi lisethelwa kwisilayidi esomile sengilazi. Ingilazi yokugaya isethwe engela ka-45 ° kuya kusihloko. Igazi elixhumana nengilazi yokugaya lisakazeka emaphethelweni alo. Ngemuva kwalokho, ngokunyakaza okusheshayo, ingilazi yokugaya iqhubekela phambili, ishelela ebusweni be-slide sengilazi. Kulokhu, igazi ligcotshwa ngensimbi yomunifomu omncane kuma-slide engilazi. I-smear kufanele ihlale ku-2/3 engaphezulu kwesilayidi sengilazi, ibe nemingcele ecacile futhi iphele ngo- "brashi" ("panicle"). Ubukhulu besifo sohlangothi kuya nge-engeli ephakathi kwengilazi: ubukhali obonakalayo, omncane unhlangothi. I-smear elungiselelwe kahle inombala ophuzi nobukhulu obulinganayo phezu kobuso bonke.
Ungacindezeli kanzima engilazini, ngoba lokhu kungaholela kumonakalo kumaseli wegazi.I-smear yegazi elungiselelwe kahle ibukeka iphuzi, iyunifomu futhi esobala ku-lumen. Kulokhu, izakhi zegazi ezakhiwe zitholakala kulo ungqimba olulodwa.
fig. 4. inqubo ye-smear yokulungiselela.
Umsebenzi we-6. Phendula imibuzo elandelayo ukulawula okufundayo:
Yimuphi umshini odingekayo ukuthatha igazi emunweni?
Yini isitayela sokusiza elebhu?
Yini ehlanganisiwe ekubekeni umsizi welebhu?
Imiphi imithetho yokulungiselela isiguli ukuthatha igazi emunweni?
Bhala uhlu lokulandelana kwamasampula wegazi ocwaningweni.
Ungayenza kanjani indlela yokubhoboza umunwe?
Ungathatha kanjani igazi ukuthola i-ESR?
Ungalithatha kanjani igazi ukubala amaseli abomvu egazi?
Ungalithatha kanjani igazi ngokubala amaseli amhlophe egazi?
Ungalithatha kanjani igazi ukuthola i-hemoglobin?
Ungayenza kanjani i-smear yegazi?
Yiziphi izimpawu zesimonyo esilungiselelwe kahle.
Funda amanothi ezinkulumo.
Amaphutha angenzeka ngesampula yegazi.
Ukuhlelwa komsebenzi womsizi welebhu, ukulungisa izitsha, imishini, ama-reagents. Umsizi weLab
Imithetho yokulungiselela isiguli isifundo.
Ukulandelana kwamasampula egazi ezifundweni ezahlukahlukene.
Izimpawu ze-smear ezilungiselelwe kahle.
Ama-oda nemiyalo yoMnyango Wezempilo weRiphabhuliki yaseBelarus ekuvinjelweni kwe-serum hepatitis kanye nengculazi ezikhungweni zezempilo kubasebenzi bezokwelapha ababandakanyeka ekunikezelweni isampula kwegazi nokuhlolwa.
Ukusetshenziswa kwegazi le-capillary, ukubulala amagciwane nokufakwa inzalo kwe-glassware esetshenzisiwe elebhu, izinsimbi, izinto zokuvikela.
igazikusuka . izinduna tame indlela (ngomunwe induku.
Imisebenzi ejwayelekile yokuhlolwa kwesitifiketi sokugcina sezwe sokuthweswa iziqu ezikhungweni zemfundo ephakeme yezokwelapha ezikhethekile
. izindlela ukuxilongwa nokwelashwa e) ukubalwa kwezindleko ukugcwaliseka ezithile indlela . ukuhlaziyaigazi (emtholampilo kanye ne-biochemical) (amaphuzu - 0) Isimo se-hemodynamic (amaphuzu - 0) 36 Ngoba okuyinto kusuka . 2 ibhukwana igatsha. isiteshi ngoba 1-1,5 iminwe (amaphuzu ngobaukuthatha .
Ukutadisha kwengane kuhlukaniswe izigaba eziningana
. ibhukwana . izindlela Konke ukuxilonga izindlela izifundo zihlukaniswe ngokuyisisekelo nokwengeziwe. Okuyinhloko emtholampiloizindlela . izindlela ucwaningo: jikelele ukuhlaziyaigazi . ukugcwaliseka . ngoba ukondla kusuka kudingeka izinkomishi zezingane ukuthatha . igazikusukaumunwengoba .
Ibhukwana lokuqeqesha, ama-algorithms namakhithi okwenza imisebenzi yezandla, ukulingisa
. izindlela nezindlela ukugcwaliseka imisebenzi efanelekile, uyihlole ukugcwaliseka . ezimbili ngeminwe b) isikhumba kuthathiwe c. emtholampilo ukutakula kanye ne-2 bacteriological engemihle iyahlaziya . kusukaigazi esiswini. Ngaphezu kwalokho, ama-sorbents asetshenzisiwe ngoba . tame .
Amadivayisi we-lanceolate anamuhla akuvumela ukuthi ukhethe ileveli yokubopha, ngokuya ngobukhulu besikhumba. Ukujula futhi kuya ngokuthi isiguli sicindezela kangakanani ikhanda lepeni lokubhoboza. Lapho uhlola igazi ezinganeni, kuvame ukukhethwa indawo encane ukuze kungalethi usizi emntwaneni futhi ithole idatha ethembekile.
Isampula yegazi leminwe
Ukubhoboza umshini onedivaysi ye-lanceolate kuvame ukwenziwa kakhulu eminwe yezandla, ngoba le yindawo efinyeleleka kakhulu lapho kungekho khona i-hairline, kanti inani lokuphela kwezinzwa lincane.
Kukhona nemithambo yegazi eminingi emunweni, ukuze uthole igazi ngokuguqa izandla zakho ngobumnene. Isilonda, uma kunesidingo, sitholakala kalula ngo-magciwane ngesikhumba esinezidakwa.
Ngesikhathi sokuhlaziywa, udinga ukwazi ukuthi yimuphi umunwe ukuthatha igazi ushukela we-glucometer. Ukuthola idatha ethembekile, ukubhoboza kwenziwa enkombeni, maphakathi noma isithupha. Kulokhu, isifunda sokukhiqizwa kwegazi kumele siguqulwe isikhathi ngasinye ukuze amanxeba abuhlungu nokuvuvukala akhiqize esikhunjeni.
Njengomthetho, emtholampilo noma ekhaya, igazi lithathwa emunweni wendandatho, ngoba isikhumba esikuso sinciphile kakhulu futhi nenani elincane lama-receptors ezinhlungu. Yize kulula ukuthola igazi kusuka emunweni omncane, lixhumana ngqo nesihlakala.
Ngakho-ke, uma kwenzeka ukutheleleka isilonda, inqubo yokuvuvukala ihlala ifinyelela esibayeni se-carpal.
Indlela yokubhoboza umunwe
Inaliti yepeni yokubhoboza ibekwa kahle hhayi endaweni yomunwe uqobo, kodwa kancane ngasohlangothini, endaweni ephakathi kwepuleti lezipikili nephedi. Ukusuka emaphethelweni wezipikili kufanele kubuyele ku-3-5 mm.
Lapho usebenza nge-glucometer, igazi lisetshenziselwa endaweni ethile endaweni yokuhlola yomucu. Ukufika ngqo kwelitshe, ukuhlolwa kwegazi kufanele kwenziwe kuphela egumbini elikhanyiswe kahle, lokhu kuzovumela onesifo sikashukela ukubona yonke imininingwane futhi enze ukuhlolwa kahle.
Kuphela kungumhlaba owomile wesikhumba okudingeka ukuthi uklanyelwe, ngakho-ke, ngaphambi kwenqubo, onesifo sikashukela kufanele ahlanze izandla zakhe ngensipho futhi azomise kahle ngethawula. Ngaphandle kwalokho, ithonsi legazi lizosakazeka esikhunjeni esimanzi.
Umunwe ohlukunyeziwe ulethwa endaweni yokuhlolwa ebangeni lesenti elilodwa, ngomunwe wesibili wesandla esifanayo kunconywa ukuthi uphumule ngokumelene nomzimba wemitha ukuze kulungiswe indawo yendawo yokubopha.
Emva kwalokho, ungawucwilisa ngomunwe umunwe wakho ukhiphe inani elifanele legazi.
Imichilo yokuhlola enesithuthuthu esikhethekile ingakwazi ukudonsa ngokuzimela izinto ezibonakalayo zokuhlaziya, ezisiza kakhulu inqubo.
Iziza zokusampula zegazi ezingafani
Ngakho-ke, abanye abakhiqizi bama-glucometer bavunyelwe ukusebenzisa ingaphambili, ihlombe, umlenze ophansi noma ithanga. Kulula kakhulu ukwenza lokhu kuhlaziya kusuka ezindaweni ezingezona ezejwayelekile ekhaya, njengoba isiguli kudingeka siguqise.
Okwamanje, ezinye izindawo azibuhlungu kangako. Engxenyeni noma ehlombe, kukhona okumbalwa okuphetha izinzwa kunakuzeluleko zeminwe, ngakho-ke umuntu one-lancet prick cishe ngeke abuzwe buhlungu.
Lesi sitatimende siqinisekiswa izifundo eziningi zesayensi, ngakho-ke ngokuzwela okwandayo, odokotela batusa ukukhetha izindawo ezinobuhlungu ezingatheni ukuze kuthathwe amasampula egazi.
Uma izinga likashukela wegazi liphansi kakhulu, ukuhlaziya kuvunyelwe kuphela kusuka emunweni. Iqiniso ngukuthi kule ndawo ukujikeleza kwegazi kuyanda, ijubane lokugeleza kwegazi liphindwe izikhathi ezingama-3-5 kunokuphakama kwengalo, ehlombe noma ethangeni. Ngakho-ke, esimweni se-hypoglycemia, igazi lithathwa emunweni ukuthola idatha ethembekile.
Ngenye indlela, enye indawo kufanele igaye kahle ukuze kwandise ukuhamba kwegazi emithanjeni.
Akunakusho ukuthi kufanele uthathe igazi ezindaweni ezinama-moles kanye nemithambo, ngaphandle kwalokho onesifo sikashukela angathola ukopha kakhulu.
Endaweni yama-tendon kanye namathambo, nawo awabhobozi, ngoba cishe alikho igazi lapho futhi lilimele.
Ushukela omningi emzimbeni ungaphumela ekuxinekeni,
Ngokuphambene nalokho, izinga eliphansi likashukela egazini, kucatshangelwa indlela ejwayelekile yokudla, kungaba lapho kusanda kwenziwa umsebenzi obalulekile womzimba,
Ngesikhathi sokuzila isikhathi eside, ukunciphisa umzimba, nokudla okuqinile, ukukala amazinga kashukela wegazi akukhona ukuguquguquka, njengoba izinkomba zizobe zibukelwe phansi.
Kala ushukela wakho wegazi esiswini esingenalutho (esidingekayo), futhi, uma kunesidingo, phakathi nosuku. Ngaphezu kwalokho, lapho udinga ukulawula izinga lakho loshukela elisheshayo, udinga ukukala izinga lamakhompiyutha kashukela kusampula ngokushesha nje lapho isiguli sivukile. Ngaphambi kwalokhu, awukwazi ukuxubha amazinyo akho (kukhona i-sucrose kunamathisele) noma ukuhlafuna itshungama (ngesizathu esifanayo),
Kuyadingeka ukukala izinga ngohlobo olulodwa kuphela lwesampula - ngaso sonke isikhathi ku-venous (kusuka emthanjeni), noma njalo kuma-capillary (kusuka emunweni). Lokhu kungenxa yomehluko wamazinga kashukela wegazi ekhaya, lapho kuthatha izinhlobo zawo ezihlukile. Kwisampula ye-venous, izinkomba ziphansi kancane. Umklamo cishe wawo wonke ama-glucometer ulungele ukukala kuphela igazi kusuka emunweni.
Akunobunzima ekulinganiseni ushukela wegazi ngaphandle kwe-glucometer. Kepha ukuthola izibalo ezifundisayo kakhulu nezinhloso, udinga ukucabanga ngezinto eziningi.
Nquma indawo okuzokwenziwa kuyo ukubopha lapho ulinganisa ushukela wegazi. Kumuntu omdala, lokhu kuvame ukuba ngumunwe. Kepha ezimweni lapho kunokubanjwa okuningi kwe-phalanx ephezulu (ezigulini ezikala amazinga kashukela kakhulu), indawo ingashintshwa. Ungalinganisa ushukela wegazi ekhaya noma uhambe ngesampula kusuka kwi-earlobe, yesundu. Izinsana nezingane ezincane kakhulu azithathi izinto zokucwaninga ezivela emunweni. Bahlaba isikhumba onyaweni, esithendeni,
Hlanza kahle indawo lapho uzothatha khona isampula. Kulokhu, insipho ejwayelekile kufanelekile. Ngaphezu kwalokho, ushukela ungalinganiswa ngokuphatha isiza se-puncture ngama-wipes wotshwala noma i-antiseptic spray,
Cishe noma imiphi imitha ifakelwe inaliti ekhethekile yepeni ngomshini ovumela ukusampula kwegazi okusheshayo nokungenabuhlungu. Uma idivaysi enjalo ingafakiwe, udinga ukuyithenga ngokwahlukana, ngoba kulula kakhulu ukukala ushukela wegazi nge-glucometer nayo. Izinaliti ezedivayisini ziyasebenziseka. Zidinga ukushintshwa, noma kunjalo, azidingi ukushintshwa ngaso sonke isikhathi. Kepha esimweni lapho emndenini ezingaphezu komuntu oyedwa kunqunywa izinga likashukela egazini ngedivayisi efanayo, izinaliti zomsebenzisi ngamunye kufanele zibe ngazinye,
Namathisela indawo yokusebenza "kwesibambo" esikhunjeni, yicindezele ngokuqinile bese ucindezela inkinobho,
Beka isampula kumucu wokuhlola bese ufaka umucu ocansini olushintshiwe. Kungase kube nokuhlukahluka ngokuya ngohlobo lwezinto zokusebenza. Kwezinye izimo, umucu kufanele usufakwe kakade bese kusetshenziswa isampula kuphela. Kwabanye, ungafaka isampula legazi emgqeni bese ulifaka kuphela kwimitha ukukala ushukela wegazi,
Cindezela inkinobho kudivayisi esebenza inqubo yokuhlaziywa kwesampula. Kwamanye amamodeli, le nqubo iqala ngokuzenzakalelayo ngemuva kokusebenzisa isampula,
Linda kuze kubonakale inkomba eqinile esikrinini. Lokhu ushukela wegazi ekhaya okwamanje.
Akunobunzima bokusebenzisa imitha. Izingane zesifo sikashukela nazo zibhekana nalokhu. Uma unomkhuba othize, ukulinganisa ushukela kuzoba inqubo esheshayo nelula.
Kufanele uthathe nini ukulinganisa?
Ekuseni, ngingavuki embhedeni, esiswini esingenalutho,
Ngaphambi kokunye ukudla,
Linganisa izinga legazi amahora amabili ngemuva kokudla njalo ngehafu yehora ukuhlola ukutholwa kwama-carbohydrate (ijika leshukela lenziwa nge-analog),
Ukulinganisa ushukela wegazi nge-glucometer ngaphambi kokulala,
Uma kungenzeka, linganisa ukufundwa kwegazi sekwephuze kakhulu ebusuku noma ekuseni kakhulu, ngoba ngalesi sikhathi i-hypoglycemia ingabhekwa.
Njengoba ukubheka izinga likashukela emzimbeni nge-glucometer kulula futhi akudingi noma yiliphi ikhono, imvamisa yalezi zinqubo ayilithinti kabi izinga lempilo. Futhi njengoba kungenakwenzeka ukunquma izinga kashukela wegazi ngaphandle kwensimbi, kuba yimfuneko.
Izinto zokwakha nemishini
I-glucometer uqobo. Ikuvumela ukuthi uhlole igazi ukuze uthole okuhlushwa mahhala. Ziyahluka ngentengo, izwe lokukhiqiza, ukunemba nobulukhuni. Amadivayisi ashibhile kakhulu avame ukuba nempilo emfishane nokunemba okuphansi. Uma isiguli singafuni ukucabanga njalo ukuthi imiphumela inqunywe kahle yini, kungcono ukuthenga amadivaysi angcono (amadivaysi e-OneTouch ayaziwa),
Akunakwenzeka ukukala ushukela kahle ngaphandle kwemicu yokuhlola. Lezi imichilo yamaphepha enenhlanganisela ekhethekile esetshenziswe isampula. Ushukela wegazi unganqunywa kuphela ngokusebenzisa imichilo ehambisana nemitha. Kuyabiza futhi akuhlali kutholakala (kwezinye izinhlobo kunzima kakhulu ukuzithenga). Ngakho-ke, leli qiniso kufanele futhi libhekwe lapho ukhetha idivaysi. Banosuku lokuphelelwa yisikhathi, ngemuva kwalokho okungenzeka ukukala ushukela wegazi nabo,
Izinaliti zokuphatha, imvamisa, zifakwa kit, kepha kwesinye isikhathi kufanele zithengwe zodwa. Kulokhu, imodeli yemitha ayibalulekile, ngoba inaliti ayihlangani nayo ngqo. Izinaliti zingaphansi kokufakwa esikhundleni ngezikhathi ezithile, ngoba zintekenteke. Lokhu kunganqunywa ngokulandelana - ngokuhamba kwesikhathi, amasampula egazi esebenzisa i-glucometer kungaba buhlungu, khona-ke inaliti idinga ukushintshwa. Futhi, abasebenzisi abaningi bemitha efanayo kufanele babe nezinaliti ngazinye.
Ngokuya ngokuthi hlobo luni lephutha elinalo, iziguli kufanele ziziguqule ngokuzimele lapho zifundwa lapho zikala.
Kumadivaysi anamuhla, noma kunjalo, ukuzimisela kwe-glucose emzimbeni kunembile impela futhi kudinga cishe akukho lungiswa.
Ukulawula isimo sakho, ngaphezu kokuthola ushukela wegazi nokulinganisa ushukela ekhaya, udinga ukukhumbula ukuthi yiliphi izinga leshukela legazi elijwayelekile lesifo nomuntu ophilile. Lokhu kuzosiza ukuhlola kahle isimo sakho.
Kumuntu ophile kahle, isheke leleveli likhombisa ukugxila ku-4.4 - 5.5 mmol ilitha ngalinye. Uma ubheka ushukela kwisifo sikashukela, khona-ke izinombolo zizobe ziphakeme - kulokhu, izinga elifinyelela ku-7.2 livamile. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukala kahle ubufakazi bengane. Banokujwayelekile okuphansi - kusuka ku-3.5 kuya ku-5.0
Ngokwemvelo, ushukela wegazi ukhuphuka ngemuva kokudla. Kepha kungakapheli amahora amabili kufanele iqale ukwehla futhi (uma i-metabolism ilungile). Uma uthatha umuthi onciphisa ushukela bese uhlola igazi, khona-ke ukufundwa kuzokwehla kakhulu cishe ngokushesha. Esikhathini sikashukela kanye ne-prediabetes, kufanelekile ukubheka izinkomba kaningi, njengoba zingazinzi. Ngaphezu kwalokho, kwenziwa ushukela wegazi ukuqapha ukusebenza kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela. Mayelana nokuthi ulinganisa kanjani ushukela nokuthi imitha isebenza kanjani, bheka ividiyo engezansi.
Ungalwa kanjani kahle ushukela wegazi nge-glucometer phakathi nosuku
Izinga lokuxhaphaka kwesifo sikashukela i-mellitus kulezi zinsuku liba nje ubhubhane, ngakho-ke ukuba khona kwento ephathekayo endlini, ongasinquma masinyane ukugcwala koshukela egazini okwamanje, kubalulekile.
Uma kungekho bantu abanesifo sikashukela emndenini nasemndenini, odokotela batusa ukuthatha izivivinyo zikashukela minyaka yonke. Uma kunomlando we-prediabetes, ukuphathwa kwe-glycemic kufanele kube njalo. Ukuze wenze lokhu, udinga i-glucometer yakho, ukutholwa kwayo kuzokhokha impilo, okuzosiza ukuyigcina, ngoba izinkinga ezihambisana nalesi sifo esingapheli ziyingozi. Ithuluzi elinembe kakhulu lizohlanekezela isithombe sokuhlolwa, uma ungayinaki imiyalo nenhlanzeko. Ukuqonda ukuthi ungalinganisa kanjani kahle ushukela wegazi nge-glucometer phakathi nosuku, lezi zincomo zizosiza.
Kungenzeka kube namaphutha nezici zokuhlaziywa kwasekhaya
Isampula yegazi le-glucometer ingenziwa hhayi kuphela ukusuka eminwe, okuthi, ngendlela, okufanele ishintshwe, kanye nendawo yokubhoboza. Lokhu kuzosiza ukugwema ukulimala. Uma ingalo, ithanga, noma enye ingxenye yomzimba isetshenziswa kumamodeli amaningi ngale njongo, i-algorithm yokulungiselela ihlala ifana. Kuliqiniso, ukusakazwa kwegazi kwezinye izindawo liphansi kancane. Isikhathi sokulinganisa futhi sishintsha kancane: ushukela we-postprandial (ngemuva kokudla) ulinganiswa hhayi ngemuva kwamahora ama-2, kodwa ngemuva kwamahora ama-2 nemizuzu engama-20.
Ukuzihlaziya kwegazi kwenziwa kuphela ngosizo lwe-glucometer eqinisekisiwe kanye nemichilo yokuhlola efanele lolu hlobo lwedivayisi enempilo evamile yeshelufu. Imvamisa, ushukela olambile ulinganiswa ekhaya (esiswini esingenalutho, ekuseni) nakuma-postprandial, amahora ama-2 ngemuva kokudla. Ngokushesha ngemuva kokudla, izinkomba ziyahlolwa ukubona impendulo yomzimba emikhiqizweni ethile ukuze kuhlanganiswe itafula lomuntu siqu lokuphendula kwezitho zomzimba kohlobo oluthile lomkhiqizo. Izifundo ezifanayo kufanele zihambisane ne-endocrinologist.
Imiphumela yokuhlaziya incike kakhulu kuhlobo lwamamitha nekhwalithi yemichilo yokuhlola, ngakho-ke ukukhetha kwedivayisi kumele kusondele kulo lonke umthwalo.
Kukalwa nini ushukela wegazi nge-glucometer
Imvamisa nesikhathi senqubo kuncike ezicini eziningi: uhlobo lwesifo sikashukela, izimfanelo zemithi isiguli esithatha, kanye nohlobo lokwelashwa. Ngohlobo 1 sikashukela, kuthathwa izilinganiso ngaphambi kokudla ngakunye ukunquma umthamo. Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, lokhu akudingekile uma isiguli sinxephezela ushukela ngamathebhulethi e-hypoglycemic. Ngokulashwa okuhlangene ngokuhambisana ne-insulin noma ukwelashwa ngokuphelele kwe-insulin, ukukalwa kwenziwa kaningi, kuya ngohlobo lwe-insulin.
Kwabanesifo sikashukela esinesifo sohlobo 2, ngaphezu kwezilinganiso ezijwayelekile kaningi ngesonto (ngenqubo yomlomo yokuncephezela i-glycemia), kungakuhle uchithe izinsuku zokulawula lapho ushukela ukalwa izikhathi ezi-5-6 ngosuku: ekuseni, ngesisu esingenalutho, ngemuva kwesidlo sasekuseni, futhi kamuva ngaphambi nangemva kokudla ngakunye futhi futhi ebusuku, futhi kwezinye izikhathi ngo-3 ekuseni.
Ukuhlaziywa okunemininingwane okunjalo kuzosiza ukulungisa irejimeni yokwelashwa, ikakhulukazi ngenxephezelo yesifo sikashukela engaphelele.
Inzuzo kuleli cala inabaphethwe yisifo sikashukela abasebenzisa amadivaysi ukulawula okuqhubekayo kwe-glycemic, kepha kwabaningi bethu abahlobo bethu ama-chip anjalo ayinto yokunethezeka.
Ngezinhloso zokuvimbela, ungabheka ushukela wakho kanye ngenyanga. Uma umsebenzisi esengcupheni (iminyaka yobudala, ifa, isisindo ngokweqile, izifo ezihlangana nazo, ukucindezela okukhulayo, i-prediabetes), udinga ukulawula iphrofayili yakho ye-glycemic kaningi ngangokunokwenzeka.
Esimweni esithile, le ndaba kufanele kuvunyelwane ngayo ne-endocrinologist.
Izinkomba ze-Glucometer: ejwayelekile, etafuleni
Usebenzisa i-glucometer yomuntu siqu, ungabheka indlela umzimba osabela ngayo ekudleni nasemithini, ulawule isilinganiso esidingekayo sokuxineka ngokomzimba nangokomzwelo, futhi ulawule ngempumelelo iphrofayili yakho ye-glycemic.
Izinga likashukela lomuntu onesifo sikashukela nomuntu ophile kahle lizohluka. Endabeni yokugcina, kuye kwenziwa izinkomba ezijwayelekile ezethulwe kalula etafuleni.
Imiphi imitha engcono
Ngaphezu kokuhlaziya ukubuyekezwa kwabathengi kumaforamu we-thematic, kufanelekile ukubonisana nodokotela wakho. Ezigulini ezinazo zonke izinhlobo zesifo sikashukela, umbuso ulawula izinzuzo zemithi, ama-glucometer, imichilo yokuhlola, kanye ne-endocrinologist kumele bazi ukuthi imiphi imodeli endaweni yakho.
Uma uthenga idivaysi yomndeni okokuqala, cabanga ngamanye ama-nuances:
Okungasetshenziswa Bheka ukutholakala nezindleko zemivimbo nokuvivinya kwamanethiwekhi kunethiwekhi yakho yasekhemisi. Kufanele zihambisane ngokuphelele nemodeli ekhethiwe. Imvamisa izindleko zokusetshenziswa zidlula inani lentengo yemitha, lokhu kubalulekile ukucubungula.
Amaphutha avumelekile.Funda imiyalo evela kumenzi: iliphi iphutha elivunyelwe yidivayisi, ingabe ihlaziya ngokuthe ngqo izinga likashukela ku-plasma noma zonke izinhlobo zikashukela egazini. Uma ungazihlolela iphutha - lokhu kulungile. Ngemuva kwezilinganiso ezintathu ezilandelanayo, imiphumela kufanele ihluke ngokungabi ngaphezu kwe-5-10%.
Ukubukeka Abasebenzisi asebekhulile nabantu abangaboni kahle, ubungako besikrini nezinombolo kudlala indima ebalulekile. Yebo, uma isibonisi sinokukhanya emuva, imenyu yolimi lwesiRussia.
Ukufaka ikhodi. Linganisa izici zokufaka amakhodi, kubathengi beminyaka evuthiwe, amadivaysi anekhodi ezenzakalelayo afanelekile, angadingi ukulungiswa ngemuva kokuthengwa kwephakeji entsha ngayinye yemichilo yokuhlola.
Inani le-biomaterial. Inani legazi idivayisi elidingayo ekuhlaziyeni okukodwa lingasukela ku-0,6 liye ku-2 μl. Uma uthenga imitha kashukela egazini ngengane, khetha imodeli enezidingo ezincane.
Amayunithi ka-Metric. Imiphumela ekubonisweni ingabonakala ku-mg / dl noma mmol / l. Esikhaleni se-post-Soviet, le ndlela yokugcina isetshenziswa, ukuhumusha amanani, ungasebenzisa ifomula: 1 mol / l = 18 mg / dl. Ebusheni obudala, ukubalwa okunjalo akuhlale kulula.
Inani lememori. Lapho ukucubungula ngemiphumela imiphumela ye-elektroniki, amapharamitha abalulekile azoba inani lememori (kusuka kuma-30 kuye kwangama-1500 ezilinganiso zokugcina) nohlelo lokubala inani eliphakathi nenyanga noma inyanga.
Izici ezingeziwe. Amanye amamodeli ahambelana nekhompyutha noma amanye amagajethi, ayasazisa isidingo sezinto ezinje.
Izinto zokusebenza eziningi. Ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme, abantu abanokulimazeka kwe-lipid metabolism kanye nabanesifo sikashukela, amadivayisi anekhono elihlanganisiwe azokwazi ukusebenza kahle. Amadivayisi anhlobonhlobo awanqunyelwe ushukela kuphela, kodwa futhi nengcindezi, i-cholesterol. Intengo yemikhiqizo emisha enjalo ifanelekile.
Ngokwesilinganiso esisezingeni lentengo, abasebenzisi abaningi bakhetha imodeli yaseJapan Contour TS - okulula ukuyisebenzisa, ngaphandle kokufaka ikhodi, igazi elanele lokuhlaziywa kule modeli ngu-0.6 μl, impilo yeshelufu yemichilo yokuhlola ayishintshi ngemuva kokuvula i-canert.
Naka ukukhuphula ekhompyutheni ekhemisi - ukushintshaniswa kwamamodeli amadala wabakhiqizi abasha kwenziwa njalo.
Lapho kukhona uhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela, ukuhlolwa kwegazi ngoshukela kwenziwa nsuku zonke izikhathi eziningana ngosuku. Isikhathi esingcono kakhulu sokuxilongwa yisikhathi ngaphambi kokudla, emva kokudla nakusihlwa, ngaphambi kokulala.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo lwesibili lwesifo balinganisa ushukela egazini nge-glucometer amahlandla amabili kuya kwamathathu ngesonto, lokhu kuyadingeka ukulawula izinkomba lapho uphuza izidakamizwa ezinciphisa ushukela. Ngezinhloso zokuvimbela, isilinganiso usebenzisa i-glucometer senziwa kanye ngenyanga.
Ukuthola imiphumela efanele kakhulu, kufanele ulungiselele kusengaphambili ukuthi ihlaziywe. Kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi ukudla kuthathwa amahora angama-19 ngaphambi kokuxilongwa ekuseni. Ucwaningo lwenziwa esiswini esingenalutho, ngaphambi kokuxubha amazinyo akho, ngoba izinto ezisuka kunamathiselwe zingathinta imiphumela yokulinganisa. Ukuphuza amanzi ngaphambi kokuxilongwa nakho akudingekile.
Ividiyo ekulesi sihloko isitshela ukuthi ungabhoboza kanjani umunwe ukukala ushukela wegazi nge-glucometer.
Yiziphi izibalo zeglucose zegazi ezibhekwa njengejwayelekile?
Ukunquma ukuba khona kwe-pathology, kufanele wazi ngeleveli ejwayelekile ye-glycemia.
Esikhathini sikashukela, amanani aphakeme kunasemuntwini ophilile, kepha odokotela bakholelwa ukuthi iziguli akufanele zehlise ushukela wazo ngemikhawulo ephansi. Izinkomba ezifanele yi-4-6 mmol / l.
Ezimweni ezinjalo, onesifo sikashukela uzozizwa evamile, aqede i-cephalgia, ukudangala, ukukhathala okungapheli.
Izinhlobo zabantu abaphilile (mmol / l):
umkhawulo ophansi (igazi lonke) - 3, 33,
ukuboshwa okuphezulu (igazi lonke) - 5.55,
umkhawulo ophansi (ku-plasma) - 3.7,
umbundu omkhulu (ku-plasma) - 6.
Kubalulekile! Ukuhlolwa kwezinga le-glycemia esegazini lonke kuphakamisa ukuthi i-biomaterial yokuxilongwa ithathwa emunweni, ku-plasma evela emthanjeni.
Izibalo ngaphambi nangemva kokufakwa kwemikhiqizo yokudla emzimbeni zizokwehluka ngisho nakumuntu ophilile, ngoba umzimba uthola ushukela kuma-carbohydrate njengengxenye yokudla neziphuzo.
Ngokushesha nje lapho umuntu esedlile, izinga le-glycemia likhuphuka ngo-2-3 mmol / l.
Imvamisa, ama-pancreas akhipha i-insulin ngokushesha egazini, okumele isabalalise ama-molecule eglucisic izicubu namangqamuzana omzimba (ukuze kuhlinzekwe ngalo okokugcina ngezinsizakusebenza zamandla).
Uhlelo lokusebenza lwe-pancreatic insulin, luboniswa ngama-cells-cell we-islets weLangerhans-Sobolev
Njengomphumela, izinkomba zikashukela kufanele zinciphe, futhi zifane naphakathi kwamahora 1-1.5. Ngokuphikisana nesizinda sikashukela, lokhu akwenzeki.
I-insulin ayikhiqizwanga ngokwanele noma umphumela wayo awunakukhubazeka, ngakho-ke ushukela omningi usegazini, kanti izicubu ezikwelaphasi zihlangabezana nendlala yamandla.
Esikhathini sikashukela, izinga le-glycemia ngemuva kokudla lingafinyelela ku-10-13 mmol / L ngezinga elijwayelekile lika-6.5-7,5 mmol / L.
Ngaphezu kwesimo sempilo, ukuthi umuntu uthola iminyaka emingaki lapho kulinganiswa ushukela kuthintwa nobudala bakhe:
izinsana ezisanda kuzalwa - 2.7-4.4,
kuze kube seminyakeni engu-5 yobudala - 3.2-5,
izingane zesikole kanye nabantu abadala abangaphansi kweminyaka engama-60 (bheka ngenhla),
ngaphezulu kweminyaka engama-60 - 4.5-6.3.
Amanani angahluka ngokulandelana, kucatshangelwa izici zomzimba.
Ungayilinganisa kanjani ushukela ngemitha kashukela
Noma iyiphi i-glucometer ifaka imiyalo esetshenziswayo, echaza ukulandelana kokunquma izinga le-glycemia. Ukuze uthole ukubhoboza kanye nokusampula kwe-biomaterial ngezinhloso zokucwaninga, ungasebenzisa izindawo eziningana (i-forearm, Earlobe, ithanga, njll.), Kepha kungcono ukubhoboza ngomunwe. Kulesi sikhathi, ukujikeleza kwegazi kuphakeme kakhulu kunezinye izindawo zomzimba.
Kubalulekile! Uma ukuhamba kwegazi kukhubazekile kancane, thinta iminwe yakho noma uyihlambe kahle.
Ukunquma izinga likashukela wegazi nge-glucometer ngokuya ngamazinga nemigomo evunyelwe ngokuvamile kufaka lezi zinto ezilandelayo:
Vula idivaysi, faka umucu wokuvivinya kuyo futhi uqiniseke ukuthi ikhodi ese strip ifana nokukhonjiswa esibukweni sedivaysi.
Geza izandla zakho futhi uzomise kahle, ngoba ukuthola noma yiliphi ithonsi lamanzi kungenza imiphumela yocwaningo ingalungi.
Isikhathi ngasinye lapho kudingekile ukushintsha indawo yokudla okwenziwe ngezinto eziphilayo. Ukusetshenziswa njalo kwendawo efanayo kuholela ekubonakaleni kokusabela kokuvuvukala, imizwa ebuhlungu, ukuphulukiswa isikhathi eside. Akunconyiwe ukuthatha igazi kusithupha nasesandeni.
I-lancet isetshenziselwa ukubhula, futhi isikhathi ngasinye kufanele ishintshwe ukuvikela ukutheleleka.
Ithonsi legazi lokuqala lisuswa kusetshenziswa uboya obomile, bese kuthi kwesesibili kusetshenziswe umucu wokuhlola endaweni ophethwe ngamakhemikhali amakhemikhali. Akudingekile ukusula iconsi elikhulu legazi kusuka emunweni, ngoba uketshezi lwezicubu luzokhishwa kanye negazi, futhi lokhu kuzoholela emiphumeleni yangempela.
Kakade ngaphakathi kwemizuzwana engama-20 kuya kwengama-40, imiphumela izovela ekuboneni imitha.
Ukusetshenziswa kokuqala kwemitha kungenziwa ngaphansi kokuqashwa kukachwepheshe oqeqeshiwe ozocacisa ama-nuances wokusebenza ngempumelelo.
Lapho uhlola imiphumela, kubalulekile ukucubungula ukulinganiswa kwemitha. Eminye imishini yenzelwe ukukala ushukela egazini lonke, eminye kuyi-plasma. Imiyalo ikhombisa lokhu.
Uma imitha ikalwa ngegazi, izinombolo 3.33-5.55 zizoba yizo ezijwayelekile. Kuhlobene naleli zinga olidingayo ukuhlola ukusebenza kwakho.
Ukulinganiswa kwe-plasma yedivayisi kusikisela ukuthi amanani aphezulu azobhekwa njengejwayelekile (okujwayelekile igazi elivela emithanjeni). Cishe yi-3.7-6.
Isilinganiso sikashukela esigulini elabhorethri senziwa ngezindlela eziningana:
ngemuva kokuthatha igazi ngomunwe ekuseni ngesisu esingenalutho,
phakathi kwezifundo ze-biochemical (ngokuhambisana nezinkomba zama-transaminase, izingxenyana zamaprotheni, i-bilirubin, ama-electrolyte, njll.)
kusetshenziswa i-glucometer (lokhu kujwayelekile kumaLabhoratri ezimitholampilo azimele).
Kubalulekile! Iningi lama-glucometer ezindaweni zokucwaninga libalwa yi-plasma, kepha isiguli sinika igazi kusuka emunweni, okusho ukuthi imiphumela esefomini nezimpendulo kufanele irekhodwe uma icabanga ngokulandisa.
Ukuze bangayiphathi ngesandla, abasebenzi bebhubhoratri banamatafula okuxhumana phakathi kwezinga le-glycemia ye-capillary ne-venous. Lezi zibalo ezifanayo zingabalwa ngokuzimela, ngoba ukuhlolwa kwezinga likashukela ngegazi le-capillary kubhekwa njengokujwayelekile futhi kulungele abantu abangazi kahle izinto eziyinkimbinkimbi yezokwelapha.
Ukubala i-glycemia ye-capillary, amazinga kashukela e-venous ahlukaniswe yisici se-1.12. Isibonelo, i-glucometer esetshenziselwa ukuxilongwa ibalwa yi-plasma (uyifunda emiyalweni).
Isikrini sibonisa umphumela we-6.16 mmol / L.
Ungacabangi masinyane ukuthi lezi zinombolo zibonisa i-hyperglycemia, ngoba lapho ibalwa ngenani likashukela egazini (capillary), i-glycemia izoba ngu-6.16: 1.12 = 5.5 mmol / L, ethathwa njengesibalo esijwayelekile.
I-pathology yesifo sikashukela ayibhekwa njengoshukela omkhulu kuphela, kodwa futhi ne-hypoglycemia (ukuncipha kwayo)
Esinye isibonelo: idivaysi ephathekayo ilinganiswa ngegazi (lokhu kukhonjisiwe futhi emiyalweni), futhi ngokuya ngemiphumela yokuxilonga, isikrini sibonisa ukuthi i-glucose ingu-6.16 mmol / L. Kulokhu, awudingi ukwenza ukulandisa, ngoba lokhu kuyinkomba kashukela egazini le-capillary (ngendlela, kukhombisa ukukhuphuka).
Okulandelayo yitafula elisebenziswa abahlinzeki bezempilo ukonga isikhathi. Kubonisa ukuhambelana kwamazinga kashukela e-venous (ngokusho kwensiza) negazi le-capillary.
Izinombolo ze-plasma glucometer Ushukela wegazi Izinombolo ze-plasma glucometer Ushukela wegazi
Ukunemba kokuhlolwa kwezinga le-glycemic kuncike kudivayisi uqobo, kanye nenani lezinto zangaphandle nokuhambisana nemithetho yokusebenza. Abakhiqizi ngokwabo baphikisana nokuthi wonke amadivayisi atholakalayo okukalwa ushukela wegazi anamaphutha amancane. Ibanga lokugcina lisuka ku-10 laya ku-20%.
Iziguli zingafinyelela ukuthi izinkomba zedivayisi yomuntu siqu zinephutha elincane kunazo zonke. Kulokhu, imithetho elandelayo kufanele ibonwe:
Qiniseka ukuthi ubheka ukusebenza kwamamitha kusuka kuchwepheshe wezokwelapha ofanelekayo ngezikhathi ezithile.
Hlola ukunemba kokuhlangana kwekhodi lekhodi yokuvivinya kanye nalezo zinombolo ezikhonjiswa esibukweni sedivaysi yokuxilonga lapho ivuliwe.
Uma usebenzisa izidakamizwa zokuhlanza utshwala noma ukusula okumanzi ukuphatha izandla zakho ngaphambi kokuhlolwa, kufanele ulinde kuze kube yilapho isikhumba some ngokuphelele, bese uqhubeka nokuxilonga.
Ukuconsela ithonsi legazi emgqeni wokuhlola akunconywa. Imichilo yakhelwe ukuze igazi lingene ngaphandle kobuso babo besebenzisa amandla e-capillary. Kwanele isiguli ukusondeza umunwe onqenqemeni lwendawo oluphethwe ngama-reagents.
Iziguli zisebenzisa idayari yomuntu siqu ukuqopha idatha - lokhu kulula ukuze ujwayeze i-endocrinologist ngemiphumela yazo
Isinxephezelo sikashukela i-mellitus sitholakala ngokugcina i-glycemia ngohlaka olwamukelekayo, hhayi nje kuphela ngaphambili, kodwa futhi nangemva kokufakwa kokudla.
Qiniseka ukuthi ubukeza izimiso zokudla kwakho, yeka ukusetshenziswa kwama-carbohydrate a ukugaya noma unciphise inani lawo ekudleni.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukweqiwa isikhathi eside kwezinga le-glycemia (ngisho kuze kufike ku-6.5 mmol / l) kukhulisa ubungozi bezinkinga eziningi ezivela kwizixhobo ezinobuthi, amehlo, uhlelo lwenhliziyo nenqubo yezinzwa ephakathi.
Ezinye izindawo zokulinganisa ushukela wegazi nge-glucometer
Sanibonani bafundi abathandekayo bhulogi le-Diary of Diabetesics.Ngalezo zikhathi ezikude lapho ama-glucometer ayengathengiswa, sasihamba siyonikela ngegazi ushukela kuphela endaweni yokuhlinzwa esibhedlela. Kufanele ngabe siqale isiphakamiso, njengakule filimu ethi "Midlife Crisis." Yebo, igazi lalihlala lithathwa emunweni. Ngemuva kwalokho intuthuko yafika kithi. Ngithenge i-glucometer nokuthi ngiqale kanjani ukuyenga iminwe yami.
Ngemuva kwamaviki ama-2 - neminwe yami ilimele nokulimala kweminwe yami kusakazeka kakhulu, kangangokuba bekungenakwenzeka ukudlala isiginci (yize ngingeyena umdlali omkhulu wesigingci, umphefumulo wethu waseRussia kwesinye isikhathi uyabuza). Ngakho-ke ngacabanga ngalo mbuzo: “Kungani igazi lithathwa ukuze linqunywe kuphela ngeminwe yesandla sami?” Ngakho-ke isihloko salesi sihloko siyizinye izindawo zokuhlola igazi nge-glucometer.
Ukuze isifo sikashukela sihambe simhlophe noma sincane ngokwejwayelekile, kudingeka sihlole amazinga kashukela egazini izikhathi eziningana ngosuku.
Ukuqapha njalo "ushukela" kwenza sikwazi ukulungisa umthamo we-insulin ngokwakho, uhlele ezemidlalo, futhi ngokuvamile uphile impilo ephelele.
Futhi-ke, lokhu kushiya ukubonakala kwayo kutholakale kalula ngendlela yamachashazi, futhi kwesinye isikhathi kungalimaza lokhu.
Ngakho-ke ngangiqala ukuthola imininingwane ngezindawo ezihlukile zokuthatha igazi nge-glucose kuyo. Lapho ucela kuzinjini zokusesha, imininingwane inikeziwe, kepha yini eyethusayo, ngakho-ke ngibeka konke ndawonye kuwe nokwami. Ngemuva kwakho konke, ikhanda lami alikwazi ukugcina yonke into ngokwalo. Angikwazi ukukukhohlwa.
Ezinye izindawo zokusampula igazi zokuhlola ushukela ihlombe, ingalo, ithanga nomlenze ophansi. Uyabuza: "Kungani bengathathi gazi kulezi zindawo ezindaweni zokucwaninga?" Okokuqala, udinga ukukhumula izingubo zakho, futhi okwesibili, lezi zindawo zilungele ukuhlaziywa nge-glucometer, lapho kudingeka khona ithonsi legazi.
Izindawo ezihlukile azibuhlungu kangako.
Uma siqhathanisa isibalo sokuphelelwa yizinzwa emilenzeni, ngokwesibonelo, ingaphambili, sizobona ngokushesha ukuthi ingaphezulu lesikhumba sengalo noma ihlombe ngesentimitha sikwele kuneziphetho eziningi zemizwa ezimbalwa kunezeluleko zeminwe. Ngakho-ke, ukujova nge-lancet kuzocishe kungabi buhlungu. Kulesi sehlakalo, kwenziwa ngisho nocwaningo olwaqinisekisa ukukhishwa kwesikhumba kwezinye izindawo kungabi buhlungu.
Ushukela ophansi, kubalulekile ukuba uhlaziye kuphela kusukela emunweni.
Izinga le-glucose legazi lomuntu onesifo sikashukela lingashintsha ngokushesha, futhi ngenxa yokuthi ukujikeleza kwegazi emunweni kuphindeka izikhathi ezingama-3-5 kunamanye amaphupho, njengengalo yangaphambili, ihlombe, ithanga, umlenze ophansi, njll. Ngakho-ke, uma uzizwa une-hypoglycemia, khona-ke kungcono ukuthatha igazi ukuze lihlaziywe kusuka emunweni. Ukuze unciphise umehluko phakathi kwezinkomba zezinye izindawo neminwe, kudingeka ukugaya kakhulu.
- Musa ukubhoboza lezo zindawo lapho kukhona khona izindlwana nemithambo, lokhu kuzogwema ukopha kakhulu.
- Izindawo lapho ama-tendon namathambo evele khona futhi anganconywa ukubhoboza, okokuqala kunegazi elincane, kanti okwesibili, kubuhlungu.
- Ungenzi ama-punctures kwezinye izindawo ezinezimpawu zokuqala ze-hypoglycemia, njengoba sekushiwo, kunomehluko ekusebenzeni, lokhu kungaholela emiphumeleni emibi.
Igazi likashukela elithathwe emunweni noma emthanjeni? Yimuphi umphumela ozoba olunembile ngokwengeziwe?
Igazi likashukela lithathwa emthanjeni. Lokhu kungenxa yokuthi ukucubungula ushukela kuwukuhlaziya okuyinkimbinkimbi okuyinkimbinkimbi, lapho kubalulekile ukukhipha okwenzekile kanye namaphutha (ngoba asikhulumi ngama-microbes amancane, kepha ngempilo yabantu ngokubanzi). Igazi lithathwa emunweni we-microanalysis.
Igazi lidonswa ushukela ngezindlela ezimbili: ukusuka emunweni nakuwo umthambo .. Igazi le-capillary lihlolwa kusuka emunweni, kuveza igazi elivela emunweni, futhi imiphumela yalezi zingqinamba zombili ihlukile komunye nomunye. Egazini le-capillary, izinga leshukela elijwayelekile lisuka ku-3,3 mmol liye ku-5.5 i-mmol, ukubala kwegazi kwe-venous kubhekwa njengento ejwayelekile ye-6.1-6.8 mmol. Ukuhlolwa kwegazi okunembe ngokwengeziwe koshukela kubhekwa njenge-venous, kepha kwesinye isikhathi udokotela uyangabaza imiphumela yokuhlolwa, bese udokotela ekuyalela ukuthi kutholakale ukuthi kunesampula yegazi kabusha, i.e. okokuqala esiswini esingenalutho, bese kulandela isisombululo se-prima sikashukela noma ushukela.
Igazi likashukela lithathwa emunweni noma emthanjeni, ekuseni esiswini esingenalutho noma amahora amabili ngemuva kokudla.Kodwa, uma isiguli siselashwa esibhedlela - imvamisa yonke imihlolo ithathwa emthanjeni - esiswini esingenalutho, kufaka noshukela, akunandaba ukuthi ulithathe kuphi igazi , noma ushukela uzohluka ngokuya ngomunwe nangamathambo. Uma izivivinyo zithathwa emithanjeni, inkomba izonyuka kancane ngo-12%, odokotela kufanele bazi kangcono.Ngaphambi kokuhlolwa kweshukela, kungakuhle ukuthi ungadli ukudla okumnandi, iziphuzo ezinoshukela kusihlwa , itiye / ikofi ngoshukela, noma okunye kubhekwa - izinga ne hara egazini, kuzoba ngaphezulu kunokujwayelekile, ngokuvamile ngemva zokugcina prima ukudla ngizodabula amahora 12.Ngokubona kwami, kungcono ukuthatha izivivinyo kusuka emunweni.
Igazi likashukela (ngokusho kwabantu), okungukuthi, lokuhlaziya igazi ngamakhemikhali, lihlala lithathwa emthanjeni, ngoba kudingeka okungaphezu kwalokho ongakwazi, “ubisi” kusuka emunweni wakho. Lapha, ukuze kwenziwe uhlaziyo lomtholampilo, igazi lithathwa emunweni. Futhi ukunemba kokuhlaziywa kokuqanjwa kwegazi kuthinta ukuthi ngabe uthathe ukudla ngaphambi kokuthatha igazi nokuthi yiliphi. Njengomthetho, isampula yegazi yenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho.
Kunezivivinyo ezinoshukela ezimbalwa impela. Kusuka emunweni, emvinini, ngomthwalo, ngaphandle kwawo, nakwabanye. Ngomunwe kaningi (indlela yendabuko). Ukusuka kumthambo othathwe lapho umcimbi wokuhlaziya uzokwenziwa ngokuzenzakalelayo. Le mali yegazi idinga igazi eliningi, futhi igazi eliningi alidingeki ukunquma ushukela. Ngaphandle kokuthi i-vampire. Udinga ukunikela ngegazi esiswini esingenalutho, hhayi ukuthi uqhamuka ebhentshini, ungadli, phuza amanzi kuphela amahora ayi-12 ngaphambi kokubeletha.Ukuba yi-vein, nakho, kungaba njalo, kepha umphumela ungancishiswa kancane. Ngezinye izikhathi kuthathwa nge-glucometer (ilinganisa ukugcwala). Kepha lena ingakwazi ukuqamba amanga ngaphezulu. Funda kabanzi lapha. futhi lapha
Igazi likashukela uma lilinganiswa ekhaya ne-glucometer lithathwa emunweni! kaningi ngosuku izikhathi eziningi kuhlolwa ukuthi uhlole ngaphambi nangemva kokudla, lapho kulungiselelwa khona imitholampilo, futhi kuthathwa ikakhulukazi emunweni ovela emthanjeni, othathwe ukuhlaziya okujwayelekile.
Ukunqunywa koshukela wegazi: izindlela eziyisisekelo, ukulungiselela ukulethwa
Abantu abanesifo sikashukela baqonda ukubaluleka kokuqapha njalo nokunquma amazinga kashukela wegazi, ayingozi ezinkingeni eziningi. Manje kudalwe inani elikhulu lamadivayisi elikuvumela ukuthi usheshe, ngokunemba okuphezulu, ukubala amaphesenti kashukela egazini. Sizobheka lezi zindlela zokuthola ushukela wegazi esihlokweni.
Ukuhlaziywa okujwayelekile kakhulu. Igazi kuye litholakala emunweni. Uma ithathwe emthanjeni, khona-ke ihlolwa ngumhlaziyi ozenzakalelayo. Izimo zokwethenjwa komphumela:
awukwazi ukuphuza utshwala ngosuku,
isidlo sokugcina singamahora ayisishiyagalombili kuya nambili ngaphambi kokuthathwa kokuqukethwe,
ungawuxubheli amazinyo akho, ngoba unoshukela.
Isimo sikashukela, kubandakanya nezingane ezineminyaka engaphezu kwemi-5 ubudala, singamamilimiliyoni angama-3.3-5.5
Ukuhlolwa kwe-glycogemoglobin kunquma iphesenti le-hemoglobin eboshelwe ku-glucose. Iqondile kunesivivinyo sokuzila ukudla esivamile. Ngaphezu kwalokho, unikeza impendulo ecacile yokuthi isiguli sinesifo sikashukela noma cha. Imiphumela yayo ayithintwa yisikhathi sosuku, ukudla, ukusebenza ngokomzimba, ukubanda, njll. Izinga le-hemoglobin ye-glycated lifinyelela ku-5.7%.
Ukuhlaziywa kokumelana ne-glucose kunconywa kulabo abanemiphumela yokuzila ukudla engu-6.1 kuye ku-6.9 mmol ilitha ngalinye. Le ukuphela kwendlela yokuthola i-prediabetes esigulini.
Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuhlaziywa, ungadla ngokungenamkhawulo. Ngaphambi kokuhlaziywa, kuyadingeka ukuba yindlala (kuze kufinyelele emahoreni ayi-14). Inqubo yokuhlaziya imi kanje.
Igazi elisheshayo lithathwa ushukela.
Isiguli siphuza ikhambi lama-gramu angama-75 kashukela.
Ngemuva kwamahora amabili, kuthathwa ukuhlaziywa kwesibili.
Njengoba kunesidingo, igazi lithathwa njalo ngesigamu sehora.
Kusetshenziswa amadivaysi ephathekayo (ama-glucometer), kwenzeka ukuthi bakwazi ukuthola ushukela we-plasma ngemizuzwana embalwa. Le ndlela ibhekwa njengelula, ngoba isiguli singakwazi ukuyiqhuba ngokuzimela, ngaphandle kokuxhumana nelabhu. Kususelwa ekuhlolweni kwegazi okutholakala emunweni.Ukunemba komphumela kuphakeme kakhulu.
Usebenzisa imichilo yokuhlola inkomba, ungathola umphumela wokuhlaziywa kokuqukethwe ushukela cishe khona manjalo. Izindlela ezinjengalezi zifaka ukufaka ithonsi legazi ebusweni besiqalo sesikhombi. Ziyabonakala.
Ngokushintsha ukukhula kombala (ngokuqhathaniswa nokulinganiswa kombala ebhokisini lokuhlola), umphumela wokugcina uyatholakala.
Ukunemba kokuhlaziywa okunjalo kubhekwa njengokulinganiselwa, ngoba kuncike kumbono wombala ngamunye, izinga lombono lomuntu owenza isivivinyo.
Idivaysi yesizukulwane esisha kwakuyithuluzi le-laser elinganisa inani loshukela egazini ngosizo lokukhanya okuqondiswa ngokuqondile, olunquma kahle inkomba ehlosiwe.
Ukungabi buhlungu kwale ndlela kuhlotshaniswa nokungabikho kwesidingo sokwephula isembozo sesikhumba esihlanganisiwe nemizwa engakhululekile. Ukunemba kohlaziyo kuncike ekuqinisweni kwesibalo sedivayisi.
Kwenziwa ngodokotela abaqeqeshiwe kakhulu, kuya ngokuphelele ngezinga lolwazi lwabo.
Ngokumisela okuqhubekayo kwamazinga kashukela, uhlelo lweMiniMed luvame ukusetshenziswa, oluqukethe i-catheter epulasitiki encane efakwe ngaphansi kwesikhumba sesiguli. Lesi simiso simile, ngoba amahora angama-72 ngezikhathi ezithile ezimiselwe ngokuzenzakalelayo sithatha igazi ngokunqunywa okulandelayo kokuhlushwa kweglucose. Ukwethembeka kwemininingwane kuphakeme.
Isikhathi esibonisa isikhathi se-GlucoWatch sisebenza ngogesi wamanje njengemitha kashukela.
Umgomo wesenzo sawo uxhumana ngqo nesikhumba sesiguli, sithatha isilinganiso kathathu ehoreni amahora ayishumi nambili.
Iphutha ledivaysi enjalo likhulu, ngakho-ke lusetshenziswa ezimweni ezivamile lapho kungenzeki ukusebenzisa imishini elungile kakhudlwana.
Funda futhi i-Blood biochemistry kuma-diabetes
Kubalulekile! Ukuba khona kwezinye izifo ezinzima, ezingamahlalakhona, ukuthatha zonke izinhlobo zemithi kungathinta ushintsho emazingeni kashukela, ngakho-ke qiniseka ukuthi ucubungula leli qiniso lapho uhlola umphumela.
Amayunithi wokulinganisa ukugxila koshukela
Iyunithi ejwayelekile yokulinganisa ushukela wegazi we-plasma emazweni e-CIS yi-criterion mmol / L (millimol ngelitha), enquma ukugxilwa okudingekayo.
Kwamanye amazwe, igama elithi terminology livame ukusetshenziswa kakhulu ngohlobo lwe-mg% (milligram-pesenti), mg / dl (milligram nge-decilita).
Ukuthola umphumela ku-mg%, kufanele uphindaphinde noma iyiphi kulezi zingxenye ezingenhla zesilinganiso ngenombolo ye-18. Futhi, ngakolunye uhlangothi, ekuhumusheni okuphindaphindekayo, iyunithi lesilinganiso ku-mg% lihlukaniswe ngu-18, ukuthola amayunithi afunekayo wokulinganisa.
Ulwazi ngamasu wokuhumusha luzoba wusizo kunoma ngubani okungenzeka ukuthi uphesheya.
Ukuba khona kweshukela kukhonjiswa yinkomba ye-6.1 mmol / L, etholakala izikhathi ezi-2 zilandelana ngesikhathi sokuhlolwa kwegazi okusheshayo.
Izinga le-glucose elinqunywe phakathi nosuku esigulini njalo lidla ukudla okulingana no-11.1 mmol / L nokuningi futhi kukhombisa isifo sikashukela i-mellitus.
Imithetho ejwayelekile yokulungiselela ukukalwa
Zonke izindlela zokuhlola ushukela kufanele zibhekele izidingo ezilandelayo.
Ukuhlaziywa okunjalo kubonisa ukuthi isiguli kufanele senqabe ukudla amahora angama-10 ngaphambi kokuba iqale. Amahora amahle wokuthola isampula ngamahora asekuseni.
Usuku olwandulela lona lwenqatshelwe ukwenza imithambo esindayo yomzimba, ukuthwalwa imithwalo eyeqile. Ukuxineka, ukwesaba okwandayo ngaphambi kokuhlolwa kungadala imiphumela engathembekile.
Ngaphambi kokuqala isivivinyo sikashukela, qiniseka ukuthi ugeza izandla zakho ngokuzomisa ngokuphelele. Umunwe okhethwe ukuthola amasampula akufanele uphathwe ngezixazululo zotshwala, ngoba lokhu kungathinta kabi ukunemba kwemiphumela.
Yonke imishini ephathekayo ifakwe amadivayisi akhethekile (ama-lancets) aklanyelwe ukubhoboza isikhumba somunwe. Kumele angabinayo inzalo.
Ukubhoboza kuyadingeka endaweni engxenyeni yesikhumba somunwe, lapho kutholakala khona imikhumbi emincane ephethe izinzwa ezimbalwa.
Igazi lokuqala lisuswa ngethala lekotini elomile (oyinyumba) bese kuhlaziywa owesibili kuphela.
Umehluko kushukela we-plasma nasegazini lonke
Lapho wenza ukuhlaziya ekuseni ngesisu esingenalutho, ukugxila kwegazi le-venous ne-capillary kuyafana, ngakho-ke akukho mehluko omningi lapho ungasithola khona. Ngemuva kokudla, ibhalansi iguqukela egazini le-capillary. Umehluko phakathi kwe-arterial ne-venous igazi ngu-7%.
I-Hematocrit - inani lamaseli egazi kumthamo ophelele. Uma i-hematocrit kuyinto ejwayelekile, khona-ke umehluko phakathi kokuxoshwa kwe-glucose ku-plasma nasegazini lonke kungu-11%. Ngokwenyuka kwenkomba yemibala kuya ku-0.55, iphesenti liyakhuphuka futhi lilingane ne-15 Ngokuncipha kwe-hematocrit kuya ku-0,3 naphansi - 8%. Lokhu kuphakamisa ukuthi ukuhumusha i-plasma glucose concentration kuyinkinga.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwama-glucometer kudambise umsebenzi kuwo womabili ama-laboratories kanye neziguli ngokwazo. Umhlaziyi owakhelwe ngaphakathi uzokwenza wonke umsebenzi welebhu ngesikhathi esifushane kakhulu. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi iphutha le-metres licishe libe ngu-20%. Lokhu kusho ukuthi isifo sikashukela sitholakala kuphela ngemuva kokuhlolwa kwelebhu.
Ukuhlola ushukela okhulelwe
Ngesikhathi sokukhulelwa, ukunqunywa kokuhlushwa ushukela kuyadingeka ekutadisheni impilo yabesifazane kanye nokutholakala kwesifo sikashukela kusenesikhathi. Isidingo sokunquma ukugcwala kwe-glucose ngesikhathi sokukhulelwa sichazwa iqiniso ukuthi ngokwalo licasula i-glycemia.
Imvamisa, igazi lithathwa emunweni. Okuncane okuvamile kungenye indlela - uthango oluvela emthanjeni. Ngaphambi kokuthatha ukuhlaziya, kwenqatshelwe ukubhema (ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa!).
Ukudla kunomthelela ekwandeni kweglucose yegazi, futhi umphumela uyoba ungalungile. Kuyadingeka futhi ukukhipha ukucindezeleka kanye nokwenyuka komzimba okwenziwe. Imikhuba yoshukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa isukela kumamililitha amane kuya kwayi-5.2.
Ngemuva kokudla, okujwayelekile kuhluke kancane - kufinyelela ku-6, 7 mmol ngelitha ngalinye legazi.
Funda nokuthi Kusetshenziswa ini ekuhlolweni ushukela wegazi
Lolu cwaningo ezinganeni lwenziwa phakathi kokuhlolwa okwenziwa udokotela wezingane, kanye noma kabili ngonyaka. Kwenziwa ngesisekelo se-outpatient, futhi uma unamakhono okusebenza nge-glucometer, izinga likashukela ezinganeni lingatholakala ngabazali ekhaya.
Igazi lokuhlaziywa ezinganeni lithathwa emunweni wesandla. Izingane ezincane zingathatha igazi kusuka ezinzwaneni. Ngaphambi kocingo, ingane akufanele idle (amahora ayisishiyagalombili ngaphambi kokuhlaziywa), iphuze amanzi amaningi, iphinde ibe nokuzilolonga ngokomzimba. Ukuba khona kwezifo ezinganeni kubuye futhi kushintshe imiphumela, ukuze kuthi lapho sekuxilongwa ukuxilongwa okwenziwe elabhoratri kungenziwa.
Izinga likashukela ezinganeni lincike eminyakeni yobudala:
ezinganeni ezisanda kuzalwa, inkomba ye-glucose iphansi kancane - ukusuka ku-2.8 kuya ku-4,4 mmol ilitha ngalinye,
kuze kube yiminyaka emihlanu, ushukela uhluka kusuka ku-3.3 kuya ku-5 mmol ngelitha,
emva kweminyaka eyisihlanu, okujwayelekile ushukela wegazi kuyafana nakwabantu abadala - kusuka ku-3.3 kuye ku-5.5 mmol.
Igazi lokuhlaziywa lidinga ukunikelwa kuwo wonke umuntu. Lokhu kwenziwa ezindaweni zokuhlinzwa kunoma yisiphi isikhungo sezokwelapha. Ezinye izikhungo zezokwelapha zisebenzisa idatha ye-glucometer: kulula futhi kuthatha isikhathi esincane. Kodwa-ke, imininingwane etholakala emishini yaselebhu inembe kakhudlwana, ngakho-ke iyabhekelwa lapho kutholwa isifo sikashukela.
Kunezinhlobo ezi-2 eziphambili zamadivayisi - ama-photometric ne-electrochemical.
Umgomo wokusebenza kwamadivaysi e-photometric asuselwa ekunqumeni izinga le-glucose isebenzisa i-spectrophotometer ehlanganisiwe, kucatshangelwa izinga lokulinganiswa kokuhlolwa kwenkomba. Lolu hlobo lwensimbi luhlonyelwe ngohlelo lokuntekenteka lwamehlo, okusho ukusetshenziswa okunembile nangokucophelela.Isisindo sabo sihlaba umxhwele, ubukhulu bawo bungamandla impela, ngakho-ke bayalahlekelwa kulokhu.
Landelela ushukela wegazi lakho
Ngokuvamile, izinga le-glucose egazini phakathi nosuku lishintsha kakhulu kunaphakathi kwebanga le-3.3-5.5 mmol / l, futhi lokhu kungenxa yezinqubo zomzimba ngesikhathi sokugaya.
Ngemuva kokudla ukudla, ukufakwa okuthuthukile kwama-carbohydrate ukungena egazini kuyaqala, futhi ngemuva kokuhlukanisa i-carbohydrate eyinkimbinkimbi ibe ilula, ukumuncwa kokugcina kwenzeka. Ngenxa yokudla obukhali ushukela egazini, izinga likashukela wegazi likhuphuka futhi lidlule ku-5.5 mmol / L.
Ukwazi ukuthi isisindo se-molar sikashukela kungu-180 g / mol futhi inani legazi kumuntu omdala lingaphakathi kwamalitha ayi-5, kulula ukubala ukuthi egazini lomuntu omdala kuphela ngaphakathi kwama-3-5 amagremu kashukela.
Yize ukuhlolwa kwegazi likashukela kuthathwa emunweni, kungukuhlaziya okuhlukile futhi akufakwanga ekuhlolweni kwegazi okujwayelekile noma ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical.
Kukangaki udinga ukukala ushukela wegazi
Kunconywa iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1, ikakhulukazi esemncane ukulawula ushukela wegazi nsuku zonke izikhathi eziningana ngosuku (okungenani ngaphambi kokudla okuyinhloko nangesikhathi sokulala, futhi ngezikhathi ezithile ngemuva kokudla).
Iziguli ezinomdlavuza wesifo sikashukela sohlobo 2 sabantu asebekhulile, ezithola izidakamizwa zokudla nezempilo ze-hypoglycemic, zingahle zibe nezincazelo eziningana ngesonto, kepha ngaso sonke isikhathi ngezikhathi ezahlukene zosuku. Izilinganiso ezingeziwe zizodingeka lapho kuguqulwa indlela yokuphila ejwayelekile (ukudlala imidlalo, ukuhamba, izifo ezihlobene).
Qiniseka ukuthi ubheka nodokotela wakho ukuthi udinga kangaki ukukala ushukela wegazi.
Ukuvimbela isifo sikashukela, kwanele ukulawula izinga likashukela kanye ngenyanga, kungcono ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku.
Ungayilungiselela kanjani isilinganiso ukuze uthole umphumela onembile?
Ukuthola umphumela ofanele, amazinga okushukela egazi asheshayo adinga okulandelayo:
1. Ukudla kokugcina akufanele kube ngaphambi kwamahora ayi-18 ngakusasa
2. Ekuseni ngaphambi kokudla, amanzi (noma olunye uketshezi) futhi uxubha amazinyo akho, kufanele wenze inqubo yokulinganisa ushukela wegazi, uqaphela imithetho yokulinganisa.
Gcina le mithetho eyisisekelo elandelayo:
Kungcono ukusebenzisa igazi lomunwe ukuthola izilinganiso, ngoba ukuhamba kwegazi kuphakeme kakhulu kunezinye izindawo zokulinganisa, njengehlombe, ingalo, ithanga noma ithole.
Uma unezinkinga ngokujikeleza kwezandla zakho, phucula iminwe yakho ngaphambi kokuzigeza. Okufanayo kusebenza ngezilinganiso kwezinye izindawo zomzimba.
Ngaphambi kokulinganisa, qiniseka ukuthi ikhodi ekuvayilini enemichilo yokuhlola ifana nekhodi ekubonisweni kwemitha. Uma kungenjalo, bese ususe ifoni kabusha.
Uma kungenzeka, geza izandla ngamanzi afudumele ngaphambi kokuthatha igazi. Lokhu akusebenzi inhlanzeko kuphela, kepha futhi kwandisa ukuhamba kwegazi. Ngokujikeleza kwegazi okunganele, ukuthatha igazi kunzima, ngoba
ukuthola ithonsi legazi, ukubhoboza izimbotshana kumele kube kujule.
Sula izandla zakho kahle. Indawo yokubhoboza akufanele ibe manzi, ngoba uketshezi luhluza isampula legazi, okuholela nemiphumela yokulinganisa engalungile.
Shintsha amasampula egazi lakho njalo.
Uma uvame ukubhoboza endaweni efanayo, ukucasuka nokuqina kwesikhumba kuzokwenzeka, futhi ukuthola igazi kuzoba buhlungu ngokwengeziwe. Kunconywa ukusebenzisa iminwe emi-3 esandleni ngasinye (imvamisa musa ukusibhoboza isithupha kanye nesikhombisi). Ukubhoboza kubuhlungu okuncane uma uthatha igazi hhayi ngokuqondile enkabeni yomunwe, kepha kancane ohlangothini.
Musa ukubhoboza umunwe wakho ngokujulile. Lapho ujula ekujuleni kwenhliziyo, lapho umonakala omkhulu wethisisi, khetha ukujula okuphelele kwesibambo endaweni yokubhoboza.
Kumuntu omdala, lokhu kungu-2-3
Ungalokothi usebenzise i-lancet esetshenziswa omunye umuntu! Ngoba ithonsi elilodwa legazi elisele kule divayisi, uma lithelelekile, lingadala ukutheleleka.
Consela phansi ithonsi lokuqala legazi bese ulisusa ngotshani bekotini owomile.
Qiniseka ukuthi igazi lihlala linjenge-droplet futhi aligcotshwanga ngamafutha. Iconsi eligcotshwe ngamafutha alikwazi ukudonswa umugqa wokuhlola. Unganciphisi umunwe wakho ukuze uthole iconsi legazi elikhulu. Lapho sicindezelwa, igazi lihlangana noketshezi lwezicubu, okungaholela emiphumeleni yokulinganisa engalungile.
Qaphela: ukuvuleka kwesampula yegazi kutholakala emaphethelweni we strip yokuhlola, hhayi endizeni. Ngakho-ke, hambisa umunwe wakho onqenqemeni lomucu wokuhlola ngakwesobunxele noma kwesokudla, amakwe kumnyama. Ngaphansi kwesenzo samabutho we-capillary, inani elidingakalayo legazi lidonswa ngokuzenzakalelayo.
Susa umucu wokuhlola kusuka kwiphakheji ngokushesha ngaphambi kokulinganisa.
Imichilo yokuhlola ithola umswakama.
Imichilo yokuhlola ingathathwa ngeminwe eyomile nehlanzekile noma kuphi.
Ukufakwa ngemichilo yokuhlola kufanele kuvalwe ngokuphelele. Ine-coating egcina imichilo yokuhlola yomile. Ngakho-ke, akukho simo lapho ungadlulisi imichilo yokuhlola kwesinye isitsha.
Imichilo yokuhlola yesitolo emazingeni okushisa asekamelweni elijwayelekile. Ukushisa kwesitoreji kungu +4 - +30 ° C.
Ungasebenzisi imicu yokuhlola ngemuva kosuku lokuphelelwa isikhathi oluboniswe kwiphakheji.